အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက် ယခုနောက်ဆုံးအကြိမ် (၈) ကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်မှာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ပြီးစီးသွား ခဲ့သည်။ ဒုတိ ယအကြိမ်မြောက်မှ စတင်၍ လွှတ် တော်မှ ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ပြင်ဆင် ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်း စသည်တို့ကို တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ် ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ စုစု ပေါင်း နှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်း ဥပဒေ ၅၈ ခုကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပေပြီ။
သို့ရာတွင် ဥပဒေ၏ နောက်မှ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြား ချက်များကို ထပ်မံရေးဆွဲအတည်ပြု ပေးကြရ၏။ ၎င်းတို့အပေါ်တွင် အမှန် တကယ်လိုက်နာမှုရှိ၊ မရှိအရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိ စနစ်တကျ စစ်ဆေး မည့်သူများမရှိခြင်းကြောင့် အမိန့်သစ် တစ်ခုထုတ်လိုက်တိုင်း လာဘ်ပေးလာဘ် ယူ လုပ်နေသူ ဝန်ထမ်း(သို့မဟုတ်) ပွဲစား အချို့၏ စီးပွားရေးဈေးကွက် သစ်တစ်ခု ထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့ ရသည်။ ထို့ပြင် အမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သော အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများအပေါ် ပြည်သူ များက ”အမိန့်ထုတ် လည်း ဘာမှမဟုတ် ပါဘူးကွာ.. ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရင် ဥု ပဲ”ဆိုသော မလေးမခန့် အထင်အမြင် သေးမှုများ ပို၍သာ လာပါတော့သည်။ဒါကိုအတုယူပြီး စည်းကမ်းလိုက် နာ သူပို၍ နည်းလာရပေသည်။
ကမ္ဘာတွင် လာဘ်စားမှု၊ အကျင့် ပျက်မှုအများဆုံး ၁ဝ နိုင်ငံ စာရင်းဝင်မှ ဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် အကျင့်ပျက် သူ ဝန်ထမ်း၊ ညစောင့်၊ အသေးစား သာ မန်ဝန်ထမ်းများကို အရေးယူအပြစ် တင်နေခြင်းထက် ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခု ပျက်စီးသွားလျှင် ဝန်ကြီးမှာ တာဝန်ရှိ ပါသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ပျက်စီး ယိုယွင်းဘေးဒုက္ခရောက် သွား လျှင်လည်းနိုင်ငံ့အကြီးအကဲတွင်တာဝန် ရှိသည်ဟုသာ မြင်မိပါသည်။သို့ကြောင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးဆုံး သူများအား အပြစ်ပေးခြင်း၊ အရေးယူ ခြင်းများကို သတင်း စာများ၊ ဂျာနယ်များ မှာ မတွေ့ရသေးပါ။ ပြည်သူအများ စောင့်မျှော်၍ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များ ကို ဖတ်နေကြခြင်းမှာ မုဒိမ်းမှုဖြင့် အ ရေးယူခံရသူ ဓာတ်ပုံမ ဟုတ်..လာဘ် စား၍ အကောင်ကြီးကြီးများကို အ ရေးယူ အပြစ်ပေးလိုက်ပြီဟူသော သ တင်းနှင့် ဓာတ်ပုံသာဖြစ်သည်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော်တွင် အစ်မေးနေရသော မေး ခွန်း အချို့တွင်သာ ဘယ်နှဦးပြောင်း ရွှေ့၊ ပင်စင်ပေး၊ ရာထူးထုတ်ပယ်ကို သာ တွေ့ရှိရပါသည်။ ယနေ့အထိ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးမျှ ထုတ်ပယ်၊ စစ်ဆေးအရေး ယူ မှု သတင်းမရှိသေးပါ။ ကူးစက်မှု မြန်ဆန်ရောဂါ
ဘိန်းဖြူမူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ ကို ပြည်သူအကြား ထင်ရှားစွာ တွေ့ မြင်နိုင်သော်လည်း အကျင့်ပျက်လာဘ် ယူသူကို ကောင်းစွာမမြင်တွေ့ရပါ။ ဥပဒေအမိန့်သစ်များဖြင့် လက်တစ်လုံး ခြားလုပ်လျက် ဘိန်းထက်ပင် စွဲနေသူ များ ရှိပါသည်။ ဘိန်းစွဲသူက လူမှုဝန်း ကျင်တစ်ခုသာ ကူးစက်နိုင်ပြီး လာဘ် စားမှုမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအထိ ကူးစက်နေ ပြီဖြစ်သော မြန်မာ့ရောဂါဆိုးကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားခြင်းသည် ကူးစက်မြန်ဆန်လွယ်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များသည် ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ရုံသာမက နည်း ဥပဒေ၊အမိန့်များအားလုံးကို ဖျက်ဆီးသူ များဖြစ်သည်။ တစ်နည်း ဥပဒေအပေါ် တွင် ရောက်ရှိနေသူများအဖြစ်တွေ့ရသည်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ကောင်းစွာ အသုံးချပြီး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်တွင် အခွင့်အရေးကို ကောင်းစွာအသုံးချပြီး အထက်အရာရှိ ဆရာသမားများအား ဂါရဝထား ပူဇော်ခြင်း၊ တံစိုးလက် ဆောင်ပေး၍ ပူဇော်ခြင်းတို့ ကို ခေါင်း စဉ်ပြောင်း၍အကျင့်ပျက်လာဘ်ထိုး လိုက်ကြသည်။ ဆရာသမားများက လည်း မိမိတို့ တပည့်ဝန်ထမ်းသားမြေး များကျူးလွန် သည့်အပြစ်အပေါ်တွင် အ ပြစ် မမြင်ဘဲမျက်ကွယ်ပြုလိုက်ကြသည်။ ယနေ့အချိန်အထိ ဌာနကြီးငယ် အထက်အဆင့်အထိ ဤနည်းလမ်းများကျင့်သုံး၍ လာဘ်လာဘကြီးငယ် တို့ကို လက်ခံနေ ဆဲဖြ စ်ပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေကြဆဲဖြစ် သည့် စကားသံများ ကြားနေရဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်မှသာ အရေးယူမည် ဆိုသည်မှာ
အများပြည်သူများ၏ ထောင် သောင်းမက မျက်စိအောက် တွင်ပင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလာဘ် ပေးယူ နေကြသည့်အဖြစ်ကို အထက်လူကြီး များက လာတိုင်ပါ။ အရေး ယူ ပေးပါ မည်ဟု ကြေညာနေခြင်းမှာ ပြည်သူ ကြားတွင် ရယ်စရာဖြစ်နေပါသည်။ သားဆိုးသမီးဆိုးကို လုပ်ချင်သလို လုပ်ဟု လွှတ်ပေးထားပြီး သားဆိုး ကြောင်း သမီး ဆိုးကြောင်း အိမ်ကိုလာ ရောက်တိုင်ပါမှ သားသမီးကို အရေးယူမည်ဟု ကြေညာထားသော မိဘများနှင့် တူနေပါသည်။ အစိုးရသည် မိဘဖြစ်ပါသည်။ လက်အော က်င ယ်သားများကို စနစ်တကျအုပ်ချုပ်ကြီးကြပ်ရန် တာဝန် ယူထားသူများ ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာကိုယူ၍ တာဝန်ထမ်းနေသူများ ဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ဝန်ထမ်း ဘာလုပ်နေသည်ကို မသိ၊ ပြည်သူတိုင်မှ သိမည် ဆိုသော အဆိုပြုချက်မှာ အရည်အချင်းမရှိသော အုပ်ချုပ်သူများအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွား သည် ကို တွေ့မြ င်နေရပေသည်။ ပြည် သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အိမ်တွင်လာ ရောက်ခိုးသွားသော အမှုမျိုးမဟုတ်ပါ။ ရုံးဌာနအတွင်း၊ လုပ်ငန်းအတွင်း၊ တာ ဝန်ကျ ဒေသ အ တွင်း ပြုလုပ်နေကြသော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပါသည်။
အထူးပင်အရေးကြီးလှပါသည်။ (၁) အကြီးဆုံးကိုယ်တိုင် ရိုးသား၍ လာဘ်စားခြင်းကင်းရပါမည်။ (၂) ယခုဌာနတစ်ခုကို ရောက်မှ လာဘ်မစား ဟူ၍ မရတော့ပါ။ ယခင်က လာဘ်စား ခဲ့သော သတင်းများ၊ တစ်ဦးက တစ် ဦး ဆင့်ပွားပို့ပေးနေကြပါသည်။ (၃) ဌာန တိုင်းတွင် ပုံမှန် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖြင့် အရေးပေါ်ရှောင်တခင် အဖွဲ့များ ဖွဲ့၍ စစ်ဆေးစေခြင်း၊ (၄) ပြည်သူများ အကြား ဆင်း၍တုံ့ပြန်မှုများကို ရယူ စေခြင်း။ (၅) ပြုလုပ်သူများကို အရေး ယူပြီး မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြ အပြစ် ပေး၊ အရှက်ရစေခြင်း။ (၆) လာဘ်စား မှု ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အသိပညာပေးပွဲများ၊ ပြည်သူအကြား ပြုလုပ်ပေးခြင်း။ (၇) ကျောင်းသင်ခန်း စာများတွင် ထည့်သွင်း၍ အလေ့ အကျင့် မွေးမြူပေးခြင်း။ (၈) အရေးယူခံရသူများ ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာများအား နိုင်ငံပိုင်သိမ်း ဆည်းခြင်း။ (၉) နယ်ပြောင်းရွှေ့စေခြင်း ကြောင့် ရောက်ရှိဒေသ၊ နယ်များ တွင် ဆက်လက်နစ်နာစေပြီး ပို၍တာဝန်လစ်ဟင်းမှုများရှိစေပါသည်။ အကျင့်ပျက်သူများလာခြင်း ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြား အရှက် ရစေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ သား များဖြစ် နေကြရသည်။ သို့ပါ၍ အကျင့်ပျက် သည့် ဝန်ထမ်းများအား အကြီးမှစ၍ ကိုင်တွယ်အရေးယူခြင်းဖြင့် လျော့ကျ နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ ။
ဆားများတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားတာက မနက်ခင်းမှာ မျက်နှာကို ဖောင်းအစ်နိုင်သလား
ဒါက ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာနေတဲ့ လူတွေမှာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ ဘူး။ လူတစ်ယောက်က ဆားကဲတဲ့ အစား အသောက်တွေကို စားပြီးချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ ဆိုဒီယမ်အဆင့် မြင့်တက် လာပါတယ်။ အဲဒီအခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဆားဓာတ်နဲ့ ရေဓာတ်ဟန်ချက် ညီမျှစေဖို့ ရေဓာတ်ကို ပိုမိုစုပ်ယူ ရပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ပုံမှန်ကျန်းမာ ရေးကောင်း နေတဲ့ လူအများစုမှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဆားနဲ့ ရေဓာတ်များတာကြောင့် မျက်နှာ မှာ အရည်စုပုံမှု မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အကြောင်းက ကျန်းမာနေတဲ့ ကျောက်ကပ်တွေက အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဆားနဲ့ ရေအပိုတွေကို စွန့်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိ လို့ပါ။ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံးနဲ့ အသည်းတို့ မကောင်းတဲ့သူတွေမှာ မျက်နှာတစ်ဝိုက် အရည် စုပုံမှုဖြစ်ပြီး ဖောင်းအစ်နေတတ် ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေချင်းဝတ်ပတ် လည်မှာ ဖောင်း အစ်မှု ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆားကဲတဲ့ အစား အသောက်တွေကို မစားတော့ဘဲ ရှောင်ရှား နေရင်တောင် မျက်နှာဖောင်းအစ်တာနဲ့ ခြေထောက်တွေ ဖောင်းအစ်တာတွေ ဖြစ်နေ ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုနေပါပြီ။
သင်ဇာက ဖြစ်နေတဲ့ ပစ္စုပ္ပန် ကိုပဲတွေးတယ်။ အနာဂတ် ကိုလည်း မတွေးဘူး။ ဖြစ်ပြီးတဲ့ အတိတ်ကို လည်း ပြန်ပြီးတော့ မစဉ်းစားဘူး။ ရေရှည်ကို မတွေး တတ်တဲ့အခါကျ တော့ ဘယ်အထိ ရောက်အောင်ငါ ဘာလုပ်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်လည်း မရှိပါ ဘူးဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို သရုပ်ဆောင် လောက အကြောင်း တစ် စေ့တစ်စောင်း လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါ..
Q. အနုပညာလောကမှာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး ကအရေး ကြီးတယ်ဆိုတော့ သင်ဇာအတွက် ရော ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါလဲ။
ထိုင်းဘုရင်၏ မြေးတော်မင်းသမီး Sirivannavari Nariratana သည် ရွှေမှန်းနိုင်သည့် အနေအထား ရှိကြောင်း
ဆီးဂိမ်းမြင်း အလှ စီး ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ထိုင်းဘုရင်၏ မြေးတော်မင်းသမီး Sirivannavari Nariratana သည် ရွှေမှန်းနိုင်သည့် အနေအထား ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမြင်း စီး အားကစားအဖွဲ့ချုပ်မှ တွဲဖက်အတွင်း ရေးမှူး ဦးသန်းဝင်းက ခန့်မှန်း ပြောသည်။
”ဒီပြိုင်ပွဲ အတွက် သူကောင်းကောင်း လေ့ ကျင့်ထားတယ်။ သြစတြေးလျ မှာတောင် သွားပြီးလေ့ကျင့် တာပါ။ ဒါကြောင့် သူကောင်း ကောင်းစီးနိုင်မှာပါ”ဟု ၄င်း ကပြော သည်။
ထိုင်း ဘုရင့်မြေးတော်သည် ဆီးဂိမ်း မြင်းစီး ပြိုင်ပွဲ အလှစီးပြိုင်ပွဲတွင် ဝင် ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
ထိုင်း ဘုရင့်မြေးတော်သည် မြင်း စီး အားကစားအား အထူးခုံမင်နှစ် သက် သူဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ တွင်မြင်းစီးကလပ် များပင် ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းသိရသည်။
ထိုင်း ဘုရင့်မြေးတော် သည် ၂၆ကြိမ် မြောက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၌ ကျင်းပ သော ဆီးဂိမ်းတွင်မူ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ လေ့လာမှုသာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် HIV ကူးစက်ခံရမှု အန္တရာယ်ဇုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်နေ
ရန်ကုန်မြို့တွင် HIV ကူးစက်ခံရမှု အန္တရာယ်ဇုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း တိုင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းက ပြောကြားလိုက်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း HIV ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် မူးယစ်ဆေး အကြောထဲထိုး သွင်းသူများဖြစ်ကြပြီး ယင်းပမာဏသည် နိုင်ငံတကာ သတ်မှတ်ချက်များအရ အန္တရာယ်ရှိသည့်အဆင့် သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ဟု SARA အဖွဲ့၏ စစ်တမ်းကို ကိုးကား၍ ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“လက်ရှိရန်ကုန်က ဒီအချက်အလက်အရ အန္တရာယ်ဇုန်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်နေတာ ကို တိုင်းအစိုးရက စီမံချက်ချ ဆောင်ရွက်ဖို့ သင့်နေပြီ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
SARA အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အငြိမ်းစားယူထားသည့် ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်၊ လားရှိုးနှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့များ တွင် မူးယစ်ဆေး အကြောတွင်းထိုးသွင်းမှုနှင့် HIV ကူးစက်ခံရမှု အခြေအနေများကို စစ်တမ်းကောက် ယူနေသည့် အဖွဲ့လည်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာတွင် အဆိုပါနည်းလမ်းဖြင့် ကူးစက်ခံရမှု ငါးရာခိုင်နှုန်းအထက် ကျော်လွန်လျှင် အန္တရာယ်ရှိသည့် အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ HIV ကူးစက်ခံရမှု အခြေအနေသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကလေးဆေးရုံ များ၌ပင် ရှိနေပြီး မိခင်မှကလေးသို့ ကူး စက်မှုများရှိနေသည့် အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် HIV ကူးစက်ခံရမှုဆိုင်ရာ အချက်လက် များကို စနစ်တကျ စိစစ်ရန် လိုအပ်နေပြီဟု ၎င်းက ယူဆထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်သိန်းကမူ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် HIV ကူးစက်ခံရသူမှာ လူဦးရေ ၏ ၀ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိသာရှိသည်ဟု ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် တိုင်းလွှတ်တော် သတ္တမအကြိမ်အစည်း အဝေးတွင် ပြောသည်။ အဆိုပါ ရာခိုင်နှုန်းသည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် တိုင်းတာလျှင် အနိမ့်ဆုံး အခြေအနေဟုပင် ဆိုနိုင်သည်ဟု ၎င်းက သုံးသပ်သည်။ ထို့ပြင် HIV ကူးစက်ခံရသူများ၏ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းကို ART ဆေးဝါးများ ဖြန့်ဖြူးပေးထားနိုင်ပြီဟု ရန်ကုန် လူမှုရေးဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
SARA ၏ စစ်တမ်းအရ မူးယစ်ဆေး ထိုးသွင်းသူများအတွင်း HIV ပိုးတွေ့ရှိရသူ အများအပြားသည် နယ် စပ်ဒေသများ၌ရှိနေသည်။ စစ်တမ်းအရ လားရှိုးတွင် ၇၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြစ်ကြီးနားတွင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိသည်ဟု SARA ၏ သုတေသန ရလဒ်များက ပြောသည်။
သူရိယနေ၀န်း ဂျာနယ်သည် ခုနစ်စောင် ထွက်ရှိပြီးရာ၌ အဆိုပါ ထွက်ပြီးသမျှ အားလုံးတွင် ပါရှိသည့် အရေးအသားများမှာ သတင်းဂျာနယ် တစ်စောင်၏ အင်္ဂါရပ်နှင့် ညီညွတ်မှု မရှိဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိုးနှက်မှုများနှင့် လက်ရှိ အစိုးရအား ထိခိုက်စေသည့် ရေးသားဖော်ပြ ချက်များကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အဆိုပါ ဂျာနယ်တွင် ရေးသားဖော်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စာပေလောက သားများကလည်း ဂျာနယ်ပါ ရေးသားဖော်ပြမှုများသည် စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်များနှင့် မညီကြောင်း၊ အ၀ါရောင်စာပေ ဖြစ်ကြောင်း၊ အမုန်းစကားများ ဖြစ်ကြောင်းကို ဂျာနယ်များနှင့် ပြင်ပလောကတွင် ရေးသား ပြောဆိုလာကြသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မော်နီတာဂျာနယ်နှင့် အင်တာဗျူးတွင်လည်း သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ် စီအီးအို ဦးမိုးဟိန်း ကိုယ်တိုင် ရေးသားမှုများသည် စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်ကို ဘေးဖယ်ထားသည်ဟု ၀န်ခံပြောကြားခဲ့ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ပေးပို့စာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအကြောင်းကြားစာနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မင်းဆွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ အနေဖြင့်မူ မည်သည့်စောဒက တက်မှုမျိုးမဆို အတက်ခံရသည့် ကာယကံရှင် နှစ်ဖက်ကို ညှိနှိုင်းပေးသည့် အလုပ်ကိုလုပ်ကြောင်း၊ ညှိနှိုင်းပေးခြင်းမှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမျှ မလုပ်ကြောင်း၊ စောဒကတက်မှုတိုင်းကိုမူ ကာယကံရှင်ကို အကြောင်းမကြားကြောင်း၊ အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး အကြောင်းကြားသင့် မကြားသင့် ဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာ ဆုံးဖြတ်ကြောင်း၊ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ (ယာယီ) အနေဖြင့် စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်အတွက် ထုတ်ပြန်ထားသည့် အချက် ၁၅ ချက် ရှိသော်လည်း အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမရှိဘဲ မီဒီယာများ၏ ဆုံးဖြတ်မှုနှင့်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
''ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကတော့ မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ့်ဟာမျိုး မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကာယကံရှင်တွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ မီဒီယာတွေရဲ့ ခံယူချက်၊ ရပ်တည်ချက်၊ သဘောထား၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အဆင့်အတန်းတွေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ကိစ္စပဲ။ ကျင့်ဝတ်ကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ ဖိအားသွားပေးလို့ မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဖိအားပေးလို့ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုဖြစ်ရင် ဒီလိုတော့ လာပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေး ရေးပါသားပါ ဒီလောက်ပဲ မေတ္တာရပ်ခံ လို့ရတယ်။ ကြားဝင်ညှိနှိုင်းမယ်။ ပြီးရင် ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီဘူးလို့ တက်လာတဲ့ ကောင်စီဝင် အားလုံးက ဆုံးဖြတ်ရင် ဒါလေးကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီတဲ့ သဘောမျိုးလေး တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သရွေ့တော့ ဒါမျိုး နောက်မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ပြီးတော့ သတိထားတင်ပြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ဆိုတာမျိုး တိုက်တွန်းတာ၊ မေတ္တာရပ်ခံတာ၊ အကြံပေးတာ ဒါပဲလုပ်ပါတယ်'' ဟု ဦးကျော်မင်းဆွေက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အကြောင်းကြားစာအပေါ် သူရိယနေ၀န်း ဂျာနယ်ဘက်သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ ထိုသို့ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှုများ ပြုလုပ်ပါက ၎င်းကိုယ်တိုင် သွားရောက် တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ပြီး မည်သျှိုမျှ ပြောစရာ မရှိသေးကြောင်း သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ ဦးခင်အေးက ပြောကြားသည်။
သူရိယနေ၀န်း ဂျာနယ်သည် သူရိယအလင်းဂျာနယ် ထုတ်ဝေမှု ရပ်ဆိုင်းသွားပြီးနောက် ချက်ချင်းပြန်လည် ထုတ်ဝေခွင့် ရရှိခဲ့သည့် ဂျာနယ်တစ်စောင် ဖြစ်သည်။ သူရိယအလင်း ဂျာနယ်ပါ ရေးသားဖော်ပြ မှုများကိုလည်း စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိကြောင်း မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် (MJN) က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မူးနောက်နောက် ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး ချာချာလည်နေ သလိုမျိုး ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အန်ချင် လောက်တဲ့ အထိ မူးနေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခေါင်းမူးတာဟာ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့ မကောင်းတဲ့ အရာပါ။ ခေါင်းမူးခြင်း ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဘာလုပ်လို့ရနိုင်သလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်
ကိုယ်ဟန်အနေအထားကြောင့် သွေးပေါင်ကျခြင်း Postural Hypotension ဟာ ရုတ်တရက် မတ်တတ် ရပ်လိုက်တဲ့အခါ သွေးပေါင်ခဏ ကျသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ထိုအခါ ဦးနှောက်ဆီ သွေးအရောက် လျော့သွားခြင်းကြောင့် ခေါင်းမူးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလုပ်နိုင်မလဲမတ်တက်ရပ်လိုက်တိုင်း လိုလို ခေါင်းမူးတက်ပါက သွေးပေါင်ချိန် စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ဆေးကုသခံနေရသူ ဆိုရင်လည်း ဆေးပမာဏ ချိန်ဆပေးဖို့ လိုကောင်း လိုနေပါလိမ့်မယ်။
(၂) Meriere's Disease
Meriere ရောဂါဆိုတာ နားအတွင်းခန်း ရောဂါကြောင့် နားလေထွက်ခြင်းနဲ့ မူးဝေခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နားအတွင်းခန်းမှာ အရည်တွေ ပိုလျှံလာပါက ချာချာလည်းမူးဝေခြင်းကို ဖြစ်စေတက်ပါတယ်။ တခြား လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ မူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အကြားအာရုံချို့ယွင်းခြင်း၊ နားအူခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါပြင်းထန်မှု ပမာဏနဲ့ အချိန်ကြာမြင့်မှုက လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ပေါ် မူတည်ပြီး ကွာဟတက် ပေမယ့် အရမ်းမူးဝေခြင်းကြောင့် ထိုင်ချလိုက်ရတဲ့အထိ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ နားအတွင်းခန်းမှာ အရည်လျှံခြင်းက ပြဿနာဖြစ်တာကြောင့် အဲသလို မဖြစ်ရအောင် စားတဲ့ အစာထဲ ဆားလျှော့စားဖို့၊ ဆီးဆေးသောက်ဖို့ လိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့မှ မရရင် နားထဲက အရည်တွေကို ဆေးရုံမှာ စုပ်ထုတ်လို့လည်း ရပါတယ်။
(Migraine) ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းဟာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း တစ်မျိူးဖြစ်သလို တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခေါင်းမူးခြင်း ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ခေါင်းမူးခြင်းဟာ Meriere ရောဂါနဲ့ လက္ခဏာ အများစု ဆင်တူနေတက် ပေမယ့် အကြားအာရုံတော့ လျော့မသွားတက်ပါဘူး။ ကားမူးခြင်း၊ လေယာဉ်မူးခြင်း၊ သဘောင်္မူးခြင်းတို့လို မူးဝေခြင်းမျိုးက ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာရှင်တွေမှာ ပိုဖြစ်ပေါ်တက်ပါတယ်။ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာ ခံစားနေရသလို ခေါင်းမူးခြင်းလည်း ဖြစ်ပေါ်တက်ပါက ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ကုဆေးတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်ပါ။
အဖြစ်အများဆုံးကတော့ Vestibular Neuritis လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရစ်ပိုး တစ်မျိုးကြောင့်ပါ။ ရေယုန်ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါပိုးနဲ့ ခပ်ဆင်ခင်တူပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးတွေက ဦးနှောက်ရှိ Vestibular နာ့ဗ်ကြောတွေပေါ် နှောင့်ယှက်လိုက်တဲ့အခါ နားတစ်ဖက် ရောင်လာတက်ကာ သင့်ကို ဟန်ချက်မညီစေတော့ဘဲ ချာချာလည် မူးဝေစေတက်ပါတယ်။
(၅) BPPV (Benign Proxysmal Positional Vertigo)
ဒီရောဂါဟာ နားအတွင်းခန်းရှိ ကယ်လ်စီယမ် ကာဗွန်နိတ်ကျောက်တွေ ပြုတ်ထွက်ကာ ရွေ့လျား နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင့်မိတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်တက်ပြီး လှဲလိုက်တဲ့အခါမျိုး၊ ခေါင်းမော့ လိုက်တဲ့ အခါမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကုန်းလိုက်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ မူးဝေတက်ပါတယ်။ဘာလုပ်နိုင်မလဲနား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတွေ အနေနဲ့ ကုသပေးနိုင်တာကြောင့် ဆေးရုံသွားပြသင့်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တွင် မည်သည့် တရုတ် ဆေးခန်းမှ ကုသခွင့် ပေးထားခြင်း မရှိ
မှတ်ပုံ မတင်ထားသော တရုတ် ဆေးခန်း တခု ကြော်ငြာ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မည်သည့် တရုတ် ဆေးခန်းကိုမှ ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ချပေး ထားခြင်း၊ တရုတ် ဆေးဆရာများ အား တရားဝင်ဆေးကုသခွင့် ပေးထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူမှု ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်သိန်း က ယမန်နေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် ပထမအကြိမ် သတ္တမ ပုံမှန် အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့) တွင် စမ်းချောင်း မဲဆန္ဒနယ်(၂)လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးမင်းအောင်က တရုတ်ဆေးခန်းနှင့် တရုတ်ဆေးဆရာများ အား ဆေးကုသခွင့် ပြုနေသည့် အပေါ်မေးမြန်း ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
“တရုတ်ဆေးခန်းတွေနဲ့ တရုတ်ဆရာဝန်တွေကို တရားဝင်ဆေးကုသခွင့် မပေးထားပါဘူး။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ကျန်း မာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ လုပ်ဆောင်ရာမှာ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကျန်းမာရေးဥပဒေ အတိုင်းသာ ခွင့်ပြုပေး တယ်။ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီကိုလည်း ဗဟိုအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး အဆင့် ဖွဲ့စည်းပြီး လိုက်လံ စစ်ဆေးနေပါတယ်”ဟုလည်း ဒေါက်တာ မြင့်သိန်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံခြားသားများ ဆေးကုသမည်ဆိုပါက တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တရားဝင် ဆေးကု လိုင်စင်လျှောက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီတွင် ခွင့်ပြုလိုင်စင် လျှောက်ခြင်း စသည့် အဆင့်ဆင့် ခွင့်ပြုချက် ရမှသာ ဆေး ကုသခွင့် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
“ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆေးကုသတာ တွေ့ရင် ဆေးခန်းကို ယာယီပိတ်သိမ်း ခိုင်းတယ်။ နောက်ပြီး စစ်ဆေးတယ်။ လိုက်နာတာ မရှိရင် ဆေးခန်းကို ပိတ်သိမ်း ခိုင်းပါတယ်”ဟု ဒေါက်တာ မြင့်သိန်းက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်တွင် အပိုလို အမည်ရှိ ဆေးခန်းသည် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖွင့်ခဲ့ပြီး တရုတ် နိုင်ငံသားများက ဆေးဝါးကုသမှု လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ် ခဲ့သဖြင့် ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာနနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တို့က ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ပိတ်သိမ်းရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စမ်းချောင်း မဲဆန္ဒနယ်(၂) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးမင်းအောင်က“ငွေကြေး တောင်းတဲ့အခါမှာ ကုသဖို့လာရင် တမျိုး၊ ကုသပြီးရင် တမျိုး၊ တခါတရံကုသ၍ မပြေလည်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်လည်းနာ၊ လူလည်းနာရတာတွေ ရှိတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတွေက သိနေပေမယ့် အရေးယူမှုပိုင်းမှာ အားနည်းနေတာတွေ ရှိနေတယ်”ဟု လွှတ်တော်တွင် ထောက်ပြ ပြောကြားသွားသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း တရုတ်အပ်စိုက် ဆေးကုခန်းများ၊ တရုတ်အကြောပြင် ဆေးခန်းများ၊ မျက်နှာပြင် ပြုပြင် မှု ဆိုင်ရာ ဆေးခန်းများ၊ မျိုးပွားခြင်း ဆိုင်ရာ ဆေးခန်းများကို ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ထိုဆေးခန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ဧရာဝတီက ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဌာနမှ အမည် မဖော်လိုသည့် တာဝန်ရှိသူ တဦးက“ဒီအပိုင်းကတော့ ကျနော်တို့ဘက်က စစ်တာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ဘက်က သေချာတယ်ဆိုရင် နာမည်နဲ့တကွ စာရင်းပေးပါ။ ကူညီရာရောက်ပါတယ်”ဟု ဖြေကြားသည်။
သို့သော် မည်သို့ အရေးယူသည်၊ မည်မျှ အရေးယူ ထားသည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိပေ။
တရုတ် ဆေးခန်းအများစုမှာ ရိုးရာအပ်စိုက်ပညာ အခြေခံကုသသည့် ဆေးခန်းများကို ရန်ကုန်မြို့ လသာလမ်း တလျှောက်တွင် အများဆုံးတွေ့ရှိရပြီး တချို့ဆေးခန်းများမှာမူ ဆေးဥ၊ ဆေးမြစ်နှင့် စက်ကိရိယာများဖြင့် အသေးစား ခွဲစိတ်ခြင်းများပါ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သွားရောက် ကုသခံခဲ့ရသူများက ပြောပြသည်။
“ညီမ အစ်မက မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံများလို့ သွားကုဖူးတယ်။ ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်မှာ။ ပန်းဖလက်(လက်ကမ်းစာစောင်)တွေ လမ်းမှာဝေ တော့ သွားကုတာ၊ သူတို့ တရုတ်ဆေးတွေနဲ့ ပေါင်းတယ်။ သောက်ခိုင်းတယ်။ အရေပြားကို ခွဲတယ်။ ပိုက်ဆံ တော်တော်ကုန်တယ်။ မသက်သာဘူး၊ စတုန်းတော့ ဟုတ်မလိုနဲ့ နောက်ပိုင်း အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ပြပြီး ကုလိုက်ရတယ်။ နာမည်က ချွိုင်ဟွမ် မျက်နှာပေါင်း တင်၊ ဝက်ခြံခြစ် အကြောပြင် ဆိုပြီးရေးထားတယ်”ဟု ကမာရွတ်တွင် နေထိုင်သူ မစန္ဒာက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီမှလည်း နိုင်ငံခြားဆရာဝန်များကို ဆေးကောင်စီနည်းဥပဒေ အတိုင်း လျှောက်ထားမှသာ ဆေးကုသခွင့် ပေး ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် မည်သည့် တရုတ်ဆေးခန်းကိုမှ ဆေးကုသခွင့် ပေးမထားကြောင်း ထုတ်ပြန် ပြောဆို ထားသည်။
သို့သော် လက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းတွင် တရားမဝင် တရုတ်ဆေးခန်းများမှာ နှစ်စဉ်တိုးပွားလျက်ရှိပြီး ဆေးကုသမှု ပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် ကုသနေကြောင်း၊ ပမာဏအားဖြင့် ဆေးခန်းပေါင်း ၅၀ ကျော် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ အငြိမ်းစား ဆရာဝန်ကြီး တဦးက ပြောသည်။
ယနေ့ ကျင်းပသော ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အရှ ဆီးဂိမ်း၏ အုပ်စုလိုက် မြင်းအလှပြိုင်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပိုင်ဆိုင်သော မြန်မာ့အလှမြင်းကို ကိုယ်စားပြုရသည့် ကမ္ဘောဒီးယာနိုင်ငံက ဆုတံဆိပ်နှင့် လွဲချော်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ဒုတိယ ငွေတံဆိပ်ဆု ၁ ဆုဆွတ် ခူးနိုင်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မြင်းကို ကမ္ဘောဒီယား မြင်းစီးသမား မစ္စတာ Puthminea Sor က စီးနင်းကာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ယနေ့ မြင်းအလှပြိုင်ပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ကြည့်ရှုကာ ဆုတံဆိပ်များ ကိုလည်း ချီး မြှင့် ပေးခဲ့သည်။ သူပိုင်ဆိုင်သည့် မြင်း ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့် လာရောက် ကြည့်ရှုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြင်းစီး အားကစားပြိုင်ပွဲသို့ လာရောက်အားပေး ကြည့်ရှုသည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ မြင်းစီး အားကစားအဖွဲ့ချုပ်က များစွာဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်ရပါကြောင်း မြင်းစီးအားကစား အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပြုံးမောင်မောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အခုလို ပြည်ပခရီးစဉ်က ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း မနားဘဲ နေပြည်တော်ကို လေယာဉ်နဲ့တက်လာပြီး မြင်းပြိုင်ပွဲကို တကူးတ က လာရောက် အားပေးကြည့်ရှုတဲ့ အတွက် ကျနော်တို့ အားကစား တဖွဲ့လုံးက ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြရတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲဝင်စဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ရသည့်အတွက် မိမိအနေဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တည်ကြည်မှုများကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ သူပိုင်ဆိုင်သော မြင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ကိုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားမိကြောင်း စင်ကာပူနိုင်ငံမှ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော မြင်းစီးကစားသမား မစ္စ Pei Jia Caroline Rosanna Chew က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပိုင်ဆိုင်သော မြန်မာ့အလှမြင်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လအတွင်းက ကျင်းပခဲ့သော ဆီးဂိမ်းအကြို မြင်းစီးပြိုင်ပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်ကြည့်ရှုအပြီး YKKO မြင်းစီးကလပ် ပိုင်ရှင်က လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့သည့် မြင်းဖြစ်ကြောင်း မြင်းစီး အားကစားအဖွဲ့ချုပ်မှ သိရသည်။
အဆိုပါမြင်းသည် မြင်းထီးဖြစ်ပြီး အဖြူနှင့် မြင်းချေးရောင် ကွက်ကျားဖြစ်ကာ သားစပ်မြင်း အမျိုးအစား ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆီးဂိမ်းပွဲတွင် မြင်းစီးအားကစားနည်း တာဝေး (အသင်းလိုက်၊ တဦးချင်း)၊ အလှပြ၊ တန်းခုံစသော ကစားနည်း ၃ မျိုးအနက် အလှပြ အားကစားနည်းတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပမှု စနစ်အရ ပြိုင်ပွဲဝင် မြင်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ မြင်းစီးအားကစား အဖွဲ့ချုပ်မှ စီစဉ်ပေးသည့် ပြည်တွင်းရှိ မြင်းများဖြင့်သာ မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး ပြိုင်ကြရကြောင်း ပြိုင်ပွဲဝင်များထံမှ သိရသည်။
ထိုင်းမြင်းစီး အားစားအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ယခုနှစ် မတ်လအတွင်း ကတည်းက မဲနှိုက်ရရှိသော မြန်မာမြင်းများနှင့် စီးနင်း ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများ အသားကျစေရန် လာရောက် လေ့ကျင့်ခဲ့ရကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်မြင်းများ မဟုတ်သည့်အတွက် အစပိုင်းတွင် အခြေအတင် ငြင်းခုံခဲ့ရမှုတချို့ ရှိခဲ့သော်လည်း အဆင်ပြေကြောင်း ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
“အခုတော့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ သိပ်တော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်မြင်းတွေ မဟုတ်တာကို တော်တော်လေးတော့ အတိုက်အခံ ဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီကမြင်းတွေကို သဘောကျပါတယ်။ ဘာမှတော့ သိပ်အပြစ်ပြောစရာ မတွေ့ပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ယနေ့ကျင်းပသော မြင်းစီးပြိုင်ပွဲတွင်လည်း ထိုင်းဘုရင်၏ မြေးတော် မင်းသမီး H.R.H Princess Sirivannavarinariratana က နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ထိပ်ကွက်အမည်ရှိ မြင်းဖြင့် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ထိုင်း ဘုရင့်မြေးတော်က ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှု အခြေအနေကို မသိရသော်လည်း ပထမဆုံး စတင်လေ့ကျင့်ရသည့် နေ့တွင် မြင်းအား ထိန်းချုပ်ရ မလွယ်ကူကြောင်း ပြောကြားသည်ဟု ယခုလ ၁၁ ရက်နေ့က ထိုင်းဘာသာနှင့် ရေးထားသည့် Banmuang ၀က်ဘ်ဆိုက် အင်တာနက် စာမျက်နှာ၌ ရေးသားထားသည်။
ထိုင်းဘုရင့် မြေးတော်က သင်္ဘာသီးထောင်းကို ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ကာ ကောက်ညှင်း၊ ကြက်သားကင်၊ ငါးကြော်တို့နှင့် စား သောက်နေရသည့် အကြောင်းကိုလည်း ရေးသား ဖော်ပြထားသေးသည်။
မြင်းစီးပြိုင်ပွဲကို နေပြည်တော်တွင် ရှိသည့် မြင်းပြိုင်ကွင်း၌ ယခုလ ၁၀ ရက်မှ ၁၈ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းဘုရင့် မြေးတော်သည် ယနေ့ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သကဲ့သို့ လာမည့်ရက်တွင်လည်း ထပ်မံ ပြိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မြင်းစီးအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးချိုက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယနေ့ကျင်းပသည့် အုပ်စုလိုက် မြင်းအလှပြိုင်ပွဲတွင် ပထမရွှေတံဆိပ်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ရရှိခဲ့ပြီး ဒုတိယငွေတံဆိပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၊ တတိယ ကြေးတံဆိပ်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံ တို့က အသီးသီး ရှိခဲ့သည်။
ယခုနောက်ဆုံး သတင်းအရ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲများတွင် နေ့လယ် ၁ နာရီ ၃၅ မိနစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံက ရွှေတံဆိပ် ၂၂ ခု၊ ငွေတံဆိပ် ၁၉ ခုနှင့် ကြေး တံဆိပ် ၁၆ ခု တို့ဖြင့် ထိပ်ဆုံးမှ ဦးဆောင်လျှက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ရွှေတံဆိပ် ၂၀ ဖြင့် ကပ်လိုက် နေသည်။
နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် စီစဉ်
(နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) တွင် တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား တွေ့ရစဉ်)
အဆင့်မြင့် ပညာကဏ္ဍ၌ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များ၏ ပညာရေးစနစ်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း အဆင့်မြင့်ပညာ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဦးစီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းရှိ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များ၏ သင်ကြားနည်း ပုံစံဖြစ်သည့် A.G.T.I သင်တန်းတွင် နှစ်နှစ် B.Tech သင်တန်းတွင် နှစ်နှစ်၊ BE သင်တန်းတွင် နှစ်နှစ်ဖြင့် သင်ကြားနေသည့် သင်ကြားရေး ပုံစံအား ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
''ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အနေနဲ့ သင်ကြားရေး အရည်အသွေး တိုးမြှင့်ဖို့အတွက် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ကြားနေတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ရေးဆွဲသွားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ သင်ကြားရေး ပုံစံထဲကမှ B.Tech သင်တန်းတွေကို ရပ်နားဖို့အတွက် အသေးစိတ် ဆွေးနွေးနေပါတယ်'' ဟု အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဦးစီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ B.Tech သင်တန်းများအား ထားရှိတော့မည် မဟုတ်ပါက နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များတွင် သင်ယူခဲ့ပြီးသည့် ကျောင်းသားများအတွက် ချင့်ချိန်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ပညာရေး ပြောင်းလဲမှုများအား အချိန်ယူညှိနှိုင်း နေရကြောင်း သိရသည်။
''B.Tech သင်တန်းတွေကို ရပ်နားလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ A.G.T.I ကနေ B.E ကို တန်းတက်ရမယ်'' ဟု သန်လျင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်နေသည့် ကိုတာရာဇံက ပြောကြားသည်။
''အင်ဂျင်နီယာကျောင်း တက်ခွင့်ရပြီ ဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်နီယာပဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ပညာရေးစနစ်တွေ စတင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ နေရာမှာ လက်တွေ့ပိုင်းကို မြှင့်တင်သင့်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ အပြင်လုပ်ငန်းခွင် ၀င်တဲ့အခါမှာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ရထားပေမယ့်လည်း အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေတယ်'' ဟု B.Tech ဖြင့် ကျောင်းပြီးထားသည့် ကိုတင်ကိုကိုက ပြောကြားသည်။
နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များ၌ B.Tech၊ B.E သင်တန်းများသို့ ပေါင်းကူးတက်ရောက်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ၀င်ခွင့်အရည်အချင်း (Qualified) ပြည့်မီမှသာ ဆက်လက် တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီး ရိုးရိုးအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် နောက်တစ်နှစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် မရှိဘဲ အဝေးသင် တက္ကသိုလ်များသို့ ပြောင်းလဲတက်ရောက်ရကြောင်း သိရပြီး ပထမနှစ် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် A.G.T.I သင်တန်းများတွင် ရမှတ်မြင့်မားမှသာ B.Tech၊ B.E သို့ ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''အင်ဂျင်နီယာ ပညာရေးစနစ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် ကတည်းက ကျွန်တော်တို့တတွေ စမ်းသပ်ခံ ပညာရေးစနစ်ထဲမှာပဲ ရောက်နေခဲ့တာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ရပြီးရင်တော့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တာပေါ့။ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရပြီး လက်မှတ်ကိုင်ထားတာပဲရှိတယ် ဆိုတာမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး'' ဟု နည်းပညာတက္ကသိုလ်၌ B.E ဘွဲ့ ရရှိထားသည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ယင်းသို့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များတွင် သင်တန်းများအား ပေါင်းကူးဆက်လက် တက်ရောက်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး B.Tech နှင့် B.E တန်းသို့ ဆက်လက် တက်ရောက်ခွင့်ရရန် A.G.T.I၊ B.Tech ဖြင့် အောင်မြင်သူများအား ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ပြုရန် အတွက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်းများက ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်း သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာနသို့ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ပေါင်း ၃၃ ခုနှင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ၂၅ ခု ရှိကြောင်း သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲ ကာလအတွင်း အကြမ်းဖက်သမားများ ၀င်ရောက်မှု မရှိစေရန် အင်တာပိုမှ တာဝန်ရှိသူများ ပြည်တွင်း၌ ရုံးထိုင်ပြီး စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး
မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေသော (၂၇) ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းစ် အားကစားပွဲတော် ကာလအတွင်း လုံခြုံမှုရှိ စေရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အင်တာပို (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့)တို့ ပူးပေါင်းပြီး အကြမ်းဖက်သမားများ ၀င်ရောက်မှု မရှိစေရန် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်မှ ရဲမှူးချုပ်စိုးမြိုင်က ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် The Daily Eleven သို့ ပြောကြားသည်။
အကြမ်းဖက်သမားများကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရန် အင်တာပိုမှ တာဝန်ရှိသူများက ပြည်တွင်းရှိ ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် ရုံးထိုင်၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပြည်တွင်း၌ လုံခြုံမှုရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာနိုင်သော လမ်းကြောင်းများ ဖြစ်သည့် ရေကြောင်းလမ်း၊ လေကြောင်းလမ်းနှင့် နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်များတွင် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မှုကို အထူးတင်းကျပ်စွာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
''မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲ ကာလမှာ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတို့အပြင် ပြည်တွင်းကို ၀င်ရောက်လာနိုင်တဲ့ လမ်းတွေကနေ အကြမ်းဖက် ပြုလုပ်မယ့်သူတွေ ၀င်ရောက်လာမှု ရှိ မရှိ ကို အင်တာပိုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ အင်တာပိုအနေနဲ့ လူဆိုးစာရင်းဝင် ဒေတာတွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့် အသုံးပြုခွင့် ပေးထားတယ်။ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်တဲ့ အခါမှာ နည်းပညာ ပိုင်းတွေကိုလည်း ကူညီပေးထားတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်တဲ့ အခါမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင် ကူညီဖို့အတွက် အင်တာပိုက တာဝန်ရှိသူတွေ ပြည်တွင်းကို ရောက်ရှိနေပါတယ်'' ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်မှ ရဲမှူးချုပ် စိုးမြိုင်က ပြောကြားသည်။
ပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများတွင် အင်တာပိုမှ စာရင်းပြုစုထားသည့် အကြမ်းဖက် စာရင်းဝင်သူများ၏ အချက်အလက်များဖြင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုကျင်းပနေသည့် ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲတွင် လုံခြုံမှုရှိစေရန် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား ၂၀၀၀၀ ကျော် အသုံးပြု ထားကြောင်း (၂၇) ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းစ် အားကစားပွဲတော် လုံခြုံရေးဆပ် ကော်မတီမှ ရုံးအဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး အောင်မြတ်မိုးထံမှ သိရသည်။
(ရန်ကုန်လေဆိပ်အတွင်း လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသော လေကြောင်းရဲမေတစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ-၀င်းမြင့်ကျော်))
နယူးယောက်စီးတီး Manhattan မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်အနီးမှာ တည် ရှိပြီး အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်
UN Headquarter နဲ့ Gantry Plaza State ပန်းခြံ တို့ရဲ့ ကြားမှာ ရှိတဲ့
East River က ကျွန်းငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကျွန်းဟာ သဘာဝကျွန်းမဟုတ်ပဲ လူလုပ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၉၀ နောင်းပိုင်းက ဂျာမနီလူမျိုး အမေရိကန်ရောက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်က ဝီလီယျံ စတိန်းဝေးမှ ပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့
မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းနဲ့ တစ်ဖက်ကမ်း ရေအောက်ဖြတ် ရထားလိုဏ်ဂူဆောက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းအစီအစဉ်ကြောင့် ကျွန်းငယ်လေးကိုပါလုပ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၇ ခုနှစ်ရောက်မှ ကျွန်းတစ်ခုအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းများရဲ့
အားထားလေးစားရတဲ့ ဒဿန ပညာရှင်၊ ဂုရု Sir Chinmoy က ဦးဆောင်ပြီး အတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။
Sir Chinmoy ဟာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဦးသန့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Chinmoy ကိုယ်တိုင် အဲဒီကျွန်းကို U Thant Island လို့ အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Belmont ကျွန်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်အစားအားဖြင့် ပေ ၁၀၀x၂၀၀ ပတ်လည်သာ ရှိတဲ့ အဲဒီကျွန်းကို ကမ္ဘာ့အထူးဆန်းဆုံး ကျွန်း ၁၀ ကျွန်းစာရင်းထဲ မှာထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအသေးငယ်ဆုံး ကျွန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အ ရောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားမယ့် ကျွန်းလို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကုန်းပေါ်မှာ ငှက်များ၊ ရေအောက်မှာ ရေမော်ညှိများတွယ်ပြီး လှပနေတဲ့ ဦးသန့်ကျွန်းလေးဟာ ကမ္ဘာသိ ထူးဆန်း ကျွန်းငယ်လေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက် အသစ်တစ်ခုအရ Alcohol လုံးဝ မသောက်သုံးတဲ့ သူတွေဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေဆုံးနိုင်ခြေများတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Alcohol ပါဝင်တဲ့ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နဲ့ အဖျော်ယမကာတွေကို ပုံမှန်သောက်သုံးသူတွေဟာ လုံးဝမသောက်တဲ့သူတွေထက် အသက်ရှည်ရှည် နေထိုင်နိုင်ပြီး အလွန်အကျွံမဟုတ်တဲ့ Drinking ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ဒါဟာ ကမ္ဘာကျော် TIME မဂ္ဂဇင်းကြီးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ။ အမေရိကန် Texas တက္ကသိုလ်မှ စိတ်ပညာရှင် ‘Charles Holahan’ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ လူတွေကို အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားလိုက် သုတေသနပြုခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းတို့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ Alcohol တစ်ခါမှ မသောက်သုံးတဲ့ သူတွေအတွက် သေဆုံးနိုင်ခြေဟာ အမြင့်ဆုံး အနေအထားမှာ ရောက်နေပြီး အလွန်အကျွံသောက်သုံးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ သေဆုံးနိုင်ခြေဟာ အလယ်အလတ် အဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှ တစ်ခွက်ကနေ သုံးခွက်အထိ ပုံမှန်သောက်သုံးတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ သေဆုံးနိုင်ခြေ အနည်းဆုံးဖြစ်ပါသတဲ့။
၎င်းတို့အနေနဲ့ လူအယောက် ၂၀၀၀ နီးပါးကို သုတေသနပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်သောက်သုံးသူတွေမှာ ၄၁% သာ အသေစောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝမသောက်တဲ့သူတွေမှာတော့ ၆၉%လောက်က စောစောစီးစီး သေကြပြီး အလွန်အကျွံသောက်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ၆၀%လောက်က အသေစောကြပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ Alcohol ဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ အတွက် ကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုပါ။
ဒါ့အပြင် ပုံမှန်သောက်တဲ့သူတွေဟာ လုံးဝမသောက်တဲ့သူတွေထက် အခမ်းအနားတွေမှာ ပိုမိုပျော်ရွှင်မှု ရရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်လက်ချမ်းသာပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းမွန်လာတာပေါ့။
Alcohol ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ၀မ်းမြောက်စရာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုသတိပြုရမှာက ဒါဟာ အမေရိကန်မှာလုပ်တဲ့ သုတေသနဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံသားတွေဟာ သန်မာပြီး ခံနိုင်ရည်လည်း ရှိကြတဲ့အပြင် အဲဒီမှာရောင်းတဲ့ အရက်ဘီယာတွေဟာ အရည်အသွေးကောင်း ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ လူတွေဟာ ခံနိုင်ရည်သိပ်မရှိကြပဲ ဒီမှာရောင်းနေတဲ့ အရက်ဘီယာတွေဟာ သူတို့နဲ့ယှဉ်ရင် အရည်အသွေးညံ့နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတိပြုဆင်ခြင် နိုင်စေရန် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ရှိ ဆီယက်တဲလ်တွင် နေထိုင်သည့် မိုက်ခ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၎င်းလေးစားအားကျသူ၊ ကြည်ညိုသူ အားလုံးကို Star Warsဇာတ်ဆောင် အရုပ်ကလေးများအဖြစ် ဖန်တီးခဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်တစ်ဦး၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် တစ်ကမ္ဘာလုံးက အသိအမှတ်ပြုထားကြသည်။ သို့သော်လည်း မိုက်ခ်လီဗစ်တ်၏ အမြင်တွင်မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် Star Wars ဇာတ်ကားများ၏ ဇာတ်ဆောင်တစ်ဦးသာ ဖြစ်လေသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ရှိ ဆီယက်တဲလ်တွင် နေထိုင်သည့် မိုက်ခ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၎င်းလေးစားအားကျသူ၊ ကြည်ညိုသူ အားလုံးကို Star Warsဇာတ်ဆောင် အရုပ်ကလေးများအဖြစ် ဖန်တီးခဲ့သည်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း အနုပညာလက်ရာလေးများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမည့် အရုပ်လေးများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ဦးတည်း မကဘဲ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ အနုပညာရှင်များလည်း ပါဝင်နေသေးသည်။
အဆိုပါ အရုပ်ကလေးများ အားလုံးသည် ဂန္ထဝင်မြောက် Star Warsဇာတ်ကောင် အရုပ်လေးများအတိုင်းပင် ခြေလက်အချိုးအဆစ် နေရာများကို လှုပ်ရှားနိုင်သည့် အပိုင်းလေးများဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ မိုက်ခ်အတွက်မူ အဆိုပါ အရုပ်ကလေးများကို ပြုလုပ်ခြင်းသည် မိမိလေးစားသူ တစ်ဦးစီကို ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြင့် ဂါရဝပြုခြင်းသာ ဖြစ်နေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မိုက်ခ်၏ ဖန်တီးမှုအရ Star Wars ဇာတ်ကားများထဲမှ မင်းသမီး Leiaအဖြစ် အသွင်ပြောင်းနေသည်။ အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရတ်အိုဘားမားကမူ Lando Calrissianဖြစ်လာပြီး သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းကမူ R2D2အဖြစ် ပုံဖော်ခံထားရသည်။
မိုက်ခ်၏ ဖန်တီးမှုများအနက် စတိဗ်ဂျော့ဘ်က C3PO၊ မိုက်ခ်တိုင်ဆင်က Darth Maul၊ ဆာရာပါလင်းက Sithတို့၏ Dark Lord၊ ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်က Darth Vaderဖြစ်နေသည်။ မဟတ္တမ ဂန္ဒီသည်ပင်လျှင် Master Yodaအဖြစ် ပါဝင်လျှက်ရှိသည်။ မိုက်ခ်သည် ချားလ်စ်ဒါဝင်၊ အော်ပရာဝင်းဖရေး၊ အေဘရာဟမ်လင်ကွန်း၊ အန်ဂျလီနာဂျိုလီ၊ ဟီလာရီကလင်တန်တို့အပြင် ကမ္ဘာကျော် တော်လှန်ရေးသမားကြီး ချေဂွေဗားရားကိုပါ Star Warsဇာတ်ရုပ်များထဲ သွတ်သွင်းခဲ့သည်။
အသက်(၃၆)နှစ်ရှိ မိုက်ခ်က အဆိုပါ အရုပ်လေးများကို (၁၀)နှစ်ကျော်မျှ အချိန်ယူ ဖန်တီးခဲ့ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ ၎င်းသည် အရုပ်ကလေးများကို သစ်သားနှင့် ပေါ်လီမာရွှံစေးတို့ကို အသုံးပြု ပုံဖော်ပြီးမှ အပြီးသတ် ဆေးခြယ်သမှု ပြုလုပ်ခြင်းဟုလည်း သိရှိရသည်။
ငွေကြေးအကျပ်အတည်းကြားမှ မိဘနှင့်သားသမီး (သို့မဟုတ်) အောက်ခြေ ပြည်သူများ၏ ဘ၀
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရွယ် မရောက်မီ လူငယ်များကြား ငွေကြေး အလွန်အကျွံ သုံးစွဲရာမှ ဆေးလိပ်သောက်သူ လူငယ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ထိ တိုးမြင့် လာသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးသုတေသန ဆိုင်ရာ အသင်းများ ၏ မှတ်တမ်း များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အရွယ်မရောက်မီ လူငယ် အများစုသည် ငွေကြေးသုံးစွဲခြင်းကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့လူငယ် စိတ် သဘောထား အရ စူးစမ်း ချင်စရာ များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော ငွေကြေး လက်နက် ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာသော မိသားစုမှ မွေးဖွားလာသည့် လူငယ်များသည် နှစ်ဖက်မိဘများ၏ အလိုလိုက်မှု၊ ချစ်ခင်မှုများကြား လိုအပ်သလို ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်သည့်အတွက် ကျောင်းနေ အရွယ်မှစ၍ ငွေကြေးကိုင်တွယ် သုံးစွဲတတ်လာသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် မိသားစုမှ မွေးဖွားလာသည့် လူငယ်များသည် မိဘများက စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေရန် အလုပ်ကို အချိန်ပေး ရုန်းကန်နေရသဖြင့် မိမိ ကလေးအား မုန့်ဖိုးပေးကာ လျစ်လျူရှုတတ်ကြသည်။ တချို့သော ဆင်းရဲနွမ်းပါးလှသည့် မိသားစုများတွင် မိဘနှစ်ပါးသာမက ကလေးငယ်များကပါ အလုပ်လုပ် ကိုင်နေကြရသဖြင့် ကလေးများငွေကြေး သုံးစွဲမှုကို သိရှိလာစေ … သည်။
ကလေးငယ်များနှင့်အရွယ် မရောက်မီ လူငယ်အများစုအနက်မှ မိဘနှင့်သားသမီးကြား လူနေမှု ဆက်ဆံရေး နွေးထွေးစေသူများနှင့် ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့် ပိတ်ပင်ခံရသော မိသားစုများမှ မွေးဖွားလာသူများသည် ပျက်စီးမှု နည်းသည်ကို တွေ့ရပြီး မိဘနှင့် သားသမီးကြား လျစ်လျူရှုမှုများ တွေ့ကြုံရသူနှင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးအရ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများဝင် ငွေတစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ ရှာဖွေနေသူများသည် ပျက်စီးလွယ်သည်ကို ကလေးစိတ် ပညာရှင် လေ့လာသူများက တွေ့ရှိကြသည်။
ထို့ကြောင့် အရွယ်မရောက်မီ ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်း၊ ကွမ်းစားသုံးခြင်း၊ အရက်သေစာ သောက်သုံးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းများတွင် လူငယ်အများစု ကျောင်းနေအရွယ်မှ စတင်စူးစမ်းသည့် အရာသည် ဆေးလိပ် သောက်သုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်များကို မုန့်ဖိုး အဖြစ် ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့် ပေးရာမှ အတတ်စမ်းချင်သူ ယောက်ျားလေး လူငယ်များအဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံလူတန်းစား အများစု နေထိုင်ကြပြီး စီးပွားရေး အခြေအနေအရ မိသားစုလိုက် ၀င်ငွေ ရှာကြရသည်မှာ မဆန်းလှပေ။ သို့သော် ပညာရည် မပြည့်ဝမီ၊ အရွယ်မရောက်မီ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ကြသည့် အတွက် ကျသင့်သည့် လုပ်ငန်းနေရာမှ ရှာဖွေရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားအရ ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပြောင်းလဲလာသည့် လူငယ်များကို မိသားစုက သော်လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုးများက သော်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက သော်လည်းကောင်း မျိုးရိုးဗီဇအရဟု ပြောကြသည်။ ကလေးငယ်များအရွယ် မရောက်မီ ယဉ်ကျေးလိမ္မာစေရန်နှင့် သိတတ် နားလည်စေရန်တို့သည်လည်း မျိုးရိုးဗီဇနှင့် မသက်ဆိုင်ပေ။
ကလေးငယ်များသည် မွေးဖွားစဉ်မှစ၍ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်၍ မိဘ၏ ထိန်းကွပ်သွန်သင်နိုင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားသည် ကလေးငယ်၏ စိတ်အခြေခံကို ပြောင်းလဲ စေနိုင်သည်။
ကလေးငယ်အများစု၏ အခြေခံ စိတ်ထားသည် စူးစမ်းချင်စိတ် ရှိသည်ဟု အများက လက်ခံထားသည်။ ကလေးများသည် ပကတိ ဖြူစင်သော စိတ်ရင်းခံများသာ ဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်၏ အားပေးမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ ကလေးငယ်များ ရှေ့ပြုမူ လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်သာ စူးစမ်းချင်သည့် စိတ်ဝင်ရောက်လာခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
မိဘများသည် ကလေးငယ်များပျက် စီးသည်ကို သိရှိသည့်အခါ ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်း၊ ဆူပူခြင်းများသာ ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ ကလေးငယ်၏ စိတ်ထဲစွဲမြဲအောင် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဟု ယူဆကြသည်။ တချို့မိဘများက အကြီးကောင်သည် ချိုသာစွာပြောလျှင်ရသည်။ အငယ်ကောင်သည် ရိုက်နှက်ဆူပူမှသာ ရသည်ဟု ခွဲခြားထားခြင်းများလည်း တွေ့ရတတ်သည်။
ဤကဲ့သို့ ပြုမူခြင်းသည် ကလေးငယ်များကြား အရွဲ့တိုက်မှု၊ မနာလိုမှု၊ အားငယ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် အားသာမှု ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည်။ ငယ်စဉ်အခါမှ နားလည်အောင် ပြောခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်၏ နားထောင် နိုင်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင့်ရမည်။ နားထောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ကလေးငယ် အများစုသည်ကောင်းဆိုး ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သည်။
အရွယ်မရောက်မီ လူငယ်များ၊ အသက်မပြည့်ပါက ဆေးလိပ်ရောင်းချခွင့် မရှိဟု စာကပ်ကာ ကြော်ငြာ သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ အသက်မပြည့်သည့် လူငယ်များ ဆေးလိပ် သောက်သုံးခြင်းသည် ဆိုင်များမှ ရောင်းချနေသည့်အတွက် မိမိတို့ သားသမီးများ ပျက်စီးရသည်ဟု မိဘအများစုက ယူဆကြသည်။
စီးပွားဖြစ် ရောင်းချသူသည် မိမိအကျိုး စီးပွားသာ ကြည့်မည်။ မှတ်ပုံတင်ပြ၍ ၀ယ်ယူရခြင်း မဟုတ်သည့် အတွက် မည်သူမဆို အသက်ပြည့်ခြင်း၊ မပြည့်ခြင်း မသိရှိနိုင်ပေ။ ထိုအခြေအနေတွင် မိဘများက အလို လိုက်ထားမှုများနှင့် ကလေးများ လက်ထဲသို့ ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့် ပေးခြင်းသည် ပျက်စီးမှုလမ်းစပင် ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များနှင့် လူငယ်အများစုသည် အရွယ်ရောက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ၀င်ရောက်နေသည့် လူလတ် ပိုင်းများထက် ငွေကြေးပိုမို သုံးစွဲနေသည်ကို ကလေးစိတ်ပညာရှင် လေ့လာသူများက ဝေဖန် ထောက်ပြ ခဲ့သော်လည်း အရွယ်မရောက်သေးသည့် လူငယ်အများစုကို ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ DJ Bar, နေ့ကလပ်၊ ညကလပ်၊ ပန်းခြံများတွင် တွေ့မြင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များနှင့် လူငယ်များသာ လိုက်နာရမည် မဟုတ်ဘဲ မိဘများကပါ ပူးပေါင်းပါဝင် ထိန်းကျောင်း ရပေမည်။ မိဘများ၏ ကလးငယ်များအပေါ် အလိုလိုက်မှု အစွန်းရောက်လျှင် အနာဂတ် လူရည်ချွန်များ ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ မိဘနှင့် သားသမီးကြား ဆက်သွယ်ထားသည့် ပေါင်းကူးတံတားသည် ငွေကြေးမဖြစ်စေဘဲ အေးမြသည့် မေတ္တာဖြင့် သွန်သင်ခြင်းသည်သာ ကလေးငယ်များ၏ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားစေ နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကလေးငယ်များနှင့် လူငယ်များ အရွယ် မရောက်မီ ပျက်စီးစေသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ကျန်းမာပညာဌာန ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဝင်းအောင်မြင့်က ““ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အများကြီးဆိုင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ပျက်စီးချင်မှ ပျက်စီးတာလေ။ ပျက်စီးချင်တဲ့ ကလေးလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ကဏ္ဍတစ်ခုပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဘာမှပြောလို့မရဘူး။ ဒီအပေါ်မှာ သိမ်းကျုံးပြီး မှတ်ချက်ပေးဖို့ တော်တော် ခက်တယ်။ တချို့မိဘတွေ ထိန်းကျောင်းမှု တော်တော်ကောင်းတယ်။ ပျက်စီးတာပဲ။ အကြောင်းအရာ တစ်ခု အပေါ်မှာ မူတည်ယူလို့ မရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဒီကိစ္စတွေပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ သိပ်များလွန်းပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်ပြောလို့တော့ မရပါဘူး။ အလိုလိုက် ခံရတဲ့ ကလေးတိုင်းလည်း မပျက်စီးပါဘူး။ အပေါင်းအသင်း မမှားဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်””
၁၄ နှစ် အရွယ် မောင်အောင်ထွန်း (မြောက်ဥက္ကလာပတွင်နေထိုင်သူ)
ဒီလမ်းဘေးမှာ အမှိုက်ကောက်နေတာ နှစ်လ၊ သုံးလ လောက်ရှိသွားပြီး၊ ကျောင်း မတက်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့် အမေကို ကျွန်တော် လုပ်ကျွေးနေတာ။ တစ်နေ့ကို ၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ လောက်ရတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် လောက်တယ်။ တစ်ခါတလေ အကြွေးတွေ ဘာတွေ ပေးရရင်မလောက်ဘူး။ ဒီလို အမှိုက်ကောက်ရတဲ့ ဘ၀မျိုးကို မကြုံချင်ဘူး။ ဒီအလုပ်ကို နေ့တိုင်းလည်း မလုပ်ချင်ဘူး။ အများနှိမ်တာတွေလည်း မခံချင်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုနှိမ်တော့ တစ်ခါတလေကျရင် ၀မ်းနည်းလာပြီး ပြန်ထိုးချင်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရိုးရိုး သားသား အမှိုက်ကောက်တဲ့ လူတွေကို ခိုးတယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ကျွန်တော် ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ နေချင်တာပေါ့ အစ်ကိုရယ်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင် လုပ်မယ်လို့တော့ စိတ်ကူးထားတယ်။ စကား အမေးအဖြေ ပြုလုပ်နေရင်း မျက်ရည် ၀ဲလာသည်။
မောင်သဲမိုး (၁၅)နှစ်၊ စည်ပင်တောင်ညွန့်တွင် နေထိုင်သူ
သားကမိဘကို ရှာကျွေးတာလေ။ သားမိဘက သားတို့ဒီလို အလုပ်လုပ်မှ အဆင်ပြေမှာ လက်ရှိ တော့(၃)တန်း တက်နေပါတယ်။ သားကျောင်းဆက်တက်သွားမယ်။ အိမ်ရဲ့ စားဝတ်နေရေးအရ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ရတာပါ။ သားအမေကြီးက အလုပ်မရှိလို့ သားအမေက စည်ပင် တောင်ညွန့်မှာ အလုပ်အလုပ်တာ စည်ပင်သာယာမှာ သားတို့က မောင်နှမ နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ညီမလေးက ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။ ကွမ်းတော့ စားတတ်တယ်။ အဖေ၊ အမေက သိရင်သားကို ဆူတယ်။
ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ ဝေဖန်နေသူတွေအပေါ် ဦးရဲထွဋ် တုံ့ပြန်ပြောကြား
၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကြီးကို ထည်ထည်ဝါ၀ါ လုပ်နိုင်တာဟာ တရုတ်နိုင်ငံက နည်းပညာတွေ အကူအညီယူတဲ့အပေါ် ဝေဖန်နေကြတာကို သမ္မတပြောခွင့်ရ ပြန်ကြားရေး ဒု ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က အခုလို တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။
၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ အသံ၊ မီး နဲ့ မီးရှုး မီးပန်း များနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နုိုင်ငံမှ နည်းပညာကို အသုံးပြုတဲ့အပေါ် ဝေဖန်နေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
မြန်မာနုိုင်ငံ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခြင်းဟာ အစိုးရ က လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်သူတွေက အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ အစုိုးရက ဒီတာဝန်ကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် ဒီပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနုိုင်ခြင်းဟာ မြန်မာပြည်သူများရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖွင့်ပွဲ၊ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားများ ခမ်းနားစွာဆောင်ရွက်နုိုင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့နည်းပညာမှန်သမျှ အသုံးပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသံ၊မီး၊နဲ့ မီးရှုးမီးပန်းများနဲ့ပတ်သက်ရင် တရုတ်နိုင်ငံက နည်းပညာ ကို အသုံးပြုခဲ့သလို ရုပ်သံ ရိုက်ကူး ထုတ်လွှင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အမေရိကန်နုိုင်ငံက Grass Valley ကုမ္ဗဏီက ပစ္စည်းများနဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ ရိုက်ကူးရေးဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အတွက် ပြင်သစ် CFI အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဗြိတိန်နုိုင်ငံက BBC Media Action တို့က အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။
ဘာတွေလုပ်နုိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အသိအမှတ်မပြုနုိုင်ပဲ ဘယ်သူလုပ်တာဆိုတာကိုပဲ ကြည့်ပြီး ပြောနေသူ များ လန်ဒန်အိုလံပစ်မှာလည်း တရုတ်နည်းပညာများသုံးခဲ့ကြောင်း အောက်ပါ လင့်ခ် များမှာ လေ့လာ ကြည့်စေလိုပါတယ်။
China-made fireworks light up London Olympics |Industries |chinadaily.com.cn
London Olympic Games made in China Anne McClain
မသိတဲ့လူတွေပြောတာ နားလည်ပေးနုိုင်ပေမယ့် စာဖတ်ပြီး သိအောင်လုပ်ရမယ့် နုိုင်ငံရေးလောက က ပုဂ္ဂိုလ်များက ပြောတာကိုတော့ သူတို့ ၀မ်းစာ မပြည့်မှု အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
မနက်အိပ်ယာထတော့ Facebook ပေါ်တက်ကြည့်လိုက်တယ်။
ရွှေပြာတောင်မှာအရေးအခင်းဖြစ်တဲ့ ပုံတွေမြင်လိုက်ရတယ်။ မဖြစ်သေးဘူး င့ါသူငယ်ချင်းတွေသိအောင် ရှဲပေးလိုက်အုံးမယ်။
"တီတီတီတီ" ။ ဖုန်းသံကလည်းမြည်လာတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ။ "ဟေ့ကောင် တို့တွေ ဆူးလေမှာ ဆန္ဒပြနေတယ်ကွ။ င့ါတို့ ပုံတွေ မင်းမြန်မြန်လာခဲ့။ ငါတို့ Facebook page နဲ့ အကောင့် တွေမှာလည်း ပုံတွေ တင်ထားတယ်။ ဝင်ကြည့်" သူငယ်ချင်းက အဲ့လိုပြောတော့ ကျနော်က
"အေးအေး သယ်ရင်း ငါအခုပဲလာပြီ" လို့ပြောပြီး သူတင်တဲ့ ပုံတွေကို ဝင် Like လုပ် အကောင့်မှာရှဲပေးလိုက်သေးတယ်။ အကောင့်မှာက Friend ငါးထောင် ရှိတော့ တစ်နာရီအတွင်းပွသွားမှာပါ။ ဒီလိုနဲ့ Laptop ကိုပိတ်ပြီး ဖုန်းအင်တာနက်ဖွင့်လို့ ဆူးလေကို ဘတ်စ်ကား နဲ့သွားပါတယ်။
ဟာ... လမ်းမှာ လူတွေရိုက်ပွဲဖြစ်နေပါလား။ မဲမဲနဲ့ ဖြူဖြူတွေ ရိုက်နေကြတာ။ ဒါ မဲမျိုး၊ ဖြူမျိုး ရန်ပွဲ ဖြစ်မယ်။ ပုံလေးရိုက်ပြီး Facebook ပေါ် တင်လိုက်အုံးမှ။ ကော်နက်ရှင်က မကောင်းတော့ ပုံလေး နည်းနည်းသေးအောင်လုပ်ပြီး တင်လိုက်အုံးမှပဲ။ ပုံ Status မှာ ဒီလိုလေး ရေးမယ်ကွာ " .. လမ်းထိပ်တွင် ဘာသာခြားတို့ အထိကရုန်းဖြစ်၊ ဗမာတွင် လူ သုံးဦးသေ"......။ ဟဲ ဟဲ။ ဟုတ်တာမဟုတ်တာ နောက်မှထား။ ဒါမှ ဖွဘုတ်မှာ ငါနာမည်ကြီးမှာ။
"တီတီတီတီ" ။ သာအေး ဖုန်းဆက်တာပဲ။ ကိုင်လိုက်အုံးမှ။ "ဟေ့ကောင်...။ ... လမ်းထိပ်မှာ အမဲတွေ ကြမ်းနေတယ်ဆို။ ငါတို့အဖွဲ့ လူ အယောက် ၂၀ ဓားကိုယ်စီနဲ့ ချီတက်နေပြီကွ။ မင်းရှိနေမယ်မလား"
"အေးအေး" ငါရှိနေမယ်သယ်ရင်း..။ လာသာလာခဲ့။ ငါလည်း ဝင်လုံးနေတယ်" လို့ ကျနော် အေးအေးပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ နောက်မှထား နာမည်ကြီးဖို့က အဓိက။
အံမယ် ငါရိုက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့ ပုံက ၁၅ မိနစ်အတွင်း Share ၁သောင်းကျော်သွားပါလားဟ။ ဟိဟိ။ ကောင်းတယ်။ Facebook message တစ်စောင်ရောက်နေပါလား။ အော် ဘာများလဲလို့ တောင်ကြီးက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဘာသာရေးထိကရုန်းတကယ်ဖြစ်မဖြစ် လှမ်းမေးတာပါလား။ ဒီလိုလေး ဖြေပေးလိုက်အုံးမှ။
"အေးဟုတ်တယ် သယ်ရင်း။ တို့ဗမာ လူအယောက် ၁၀၀ သေတယ်။ ..ထိပ်မှာ အသေခံဗုံးပေါက်တယ်။ ဗယာကျော်သည်ဗမ်းမီးလောင်လို့ လူ ၂၀ သေတယ်။ ပွဲတွေအပီအပြင်ကြမ်းနေတယ်။ တောင်ကြီး တင်မက၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း သတိရှိကြပါ။ မိမိလူမျိုးအတွက် ဒီ သတင်းကို ရှဲပေးပါ။ မရှဲရင် သင်ဟာ လူမျိုးမချစ်ဘူးလို့ မှတ်ယူပါမယ်"
ဟိဟိ။ ဆေးတော့ထိုးလိုက်ပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတော့ ဖွဘုတ်မှာ နာမည်ကြီးတော့မှာပဲ။ အဲ။ ဆူးလေး ရောက်ပြီ။ အံမယ် တယ်များနေပါလား။ ဟာ. တုတ်တွေကိုယ်စီနဲ့ပါလား။ ပုံတွေမြန်မြန်ရိုက်မှ။ ဟိုမှာ င့ါသယ်ရင်း ကိုသာဗျော။
"ဟေ့ကောင်သာဗျော၊ ရိုက်ကုန်ပီလားဟ။ အေးကွ အစောလေးတင် မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း၊ အောက်ပိုင်း၊ တောင်ကြီး နဲ့အခြားမြို့ တွေမှာပါ ရိုက်ကုန်ပြီကြားလို့ တို့လည်း ရိုက်ချင်တာနဲ့ ဒီရောက်လာတာ။"
တိန်။ ငါ့ထက်တောင် တယ် နာမည်ကြီးချင်နေပါလားဟ။ တို့လည်းရောချလိုက်မယ်။ "အေးကွ။ ဒီကောင်တွေ မလွယ်ဘူး။ တို့တွေကို တိုက်နေပြီ။ ကိုယ့်အမျိုးကို ကာကွယ်ရမယ်ကွ။ နေအုံး။ င့ါပုံလေး facebook မှာတင်ဖို့ လှလှလေးရိုက်ပေးအုံး။ ပုံလှအောင် အဝတ်တွေနည်းနည်းဖြဲလိုက်အုံးမယ်။"
"ငရုတ်ဆီပါလိုရင်ပြော သယ်ရင်း ငါ့မှာပါလာတယ်" လို့သာဗျောက ပြောတာနဲ့ မထူးဇာတ်ခင်းပြီး ငရုတ်ဆီပါ နဖူးမှာလူးရင် တုတ်ဆွဲပြီး ဟန်ရေးပြနေတဲ့ ပုံ အရိုက်ခံလိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ Facebook ပေါ် ဖုန်းနဲ့ တင်လိုက်တယ်။ ပုံတင်နေတုန်း ရဲကားတွေလည်းရောက်လာပါလေရော၊ ဘာသာခြားတွေလည်း ရောက်နေပြီး ဘယ်ကောင်က ထဆဲလိုက်လဲမသိဘူး။ သုံးဖွဲ့လို့ ရိုက်ကုန်တော့ ကျနော်လည်း ဝရုန်းသုန်းကားထွက်ပြေးရပါတယ်။
ဟဟ။ မီးခုံးဗုံး တစ်လုံး ကြဲတယ်ဟ။ Facebook ပေါ်မှာ မီးခိုးဗုံး အလုံး ၄၀ ကျော်ကြဲတယ်လို့ဖွဖို့ ပုံလေး ရိုက်အုံးမှ။ ဒီလိုနဲ့ ပုံရိုက်ပြီး ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ အထူးသတင်း အနေနဲ့ မီးခုံးဗုံး အလုံး ၄၀ ကြဲပြီး ဘာသာရေးအဓိကရုန်းပြင်းထန်းကြောင်း ရေးပြီးတင်ပစ်တယ်။ မကြာဘူး။ ၁၅ မိနစ်အတွင်း ကိုယ်တင်ထားတဲ့ ငရုတ်ဆီ လူးထားပုံကို မီးခိုးဗုံးတစ်လုံး ပုံကော ရှဲပေါင်း ၁သောင်းအထက်တက်ပြီး တစ်မဟုတ်နာမည်ကြီးလာတယ်။ ဟာ.. နယ်တွေမှာ တကယ်ဖြစ်နေပါလားဟ။ ငါပြောတယ တကယ်ယုံပြီးချကုန်ပြီ။ မထူးဘူး။ ရောချမယ်။ "ရန်ကုန်မှာအခြေအနေမဟန်တော့ပါဘူး။ ဆိုင်တွေလည်းပိတ်ကုန်ပါပြီ" အဲ့လိုကွန်းမင့်တွေ လိုက်ပေးပစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အိမ်ပြန်တော့ သူငယ်ချင်းဖုန်းတွေ တစ်ဂွံဂွံလာပါလေရော။ ကိုယ်ကလည်း မီးလောင်ရာလေပင့်ချင်နေလေတော့ "အေး ဟုတ်တယ် ငယ်ချင်း။/ င့ါနဖူး အရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ကွ။/ အေးအေး။ /မင်းတို့လည်းမခံနဲ့ချသာချ/ ပုံတွေသာ ဖွဘုတ်ပေါ် ဆက်ဆက်သာတင်ပေး။/ ငါတို့ Like ပြီးရှဲပေးမယ်။ / ညဘက်တွေ ပိုကောင်းတယ်။/ ရိုက်ကွာ။/ အေး တို့ပြောတာတွေ အားလုံး Facebook ပေါ် ပြန်တင်ကွ/ Facebook မှာ ပုံတွေ ပလူပျံပြီလားကွ။/ ဟေ့အေး။ တို့တွေ တကယ်ပြေးရတော့မယ်။/ ဟာ...။ နေရာတိုင်းမှာ တကယ်ဖြစ်နေပြီကွ/ ဟာ.... အိမ်တွေ တကယ်မီးလောင်ကုန်ပြီ/ သယ်ရင်းရေ။ ငါပြေးရတော့မယ်/ ဟာ လုပ်ပါအုံး တို့အိမ်ကို ဂဲနဲ့ ထုနေပြီ။/ ပြေးပြီဟေ့။/
ဒီလိုနဲ့ နောက်နေ့မနက် အိပ်ယာထလိုက်တော့ လူကိုယ်တိုင် ခြေမလှုပ်နိုင် လက်မလှုပ်နိုင်ပဲ ဆေးရုံပေါ်မျာ ကျောက်ပတ်တီးနဲ့ ဖြစ်နေပါလား။
သင်ခန်းစာ - Facebook သည် ယနေ့ခေတ်တွင် သတင်းအချက် ကူးပြောင်းရန် အလျင်မြန်ဆုံး နှင့် အလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်သည်။ ယင်းကို တစ်လွဲအသုံးချကာ တိုင်းပြည်ပျက်စေမည့် လုပ်ရပ်မျိုး မလုပ်မိပါ စေနှင့်။
အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကို သက်သာစေသည်။ အသီးအနှံများတွင် ရေဓာတ်ကြွယ်ဝသောကြောင့် ခံတွင်းကိုစိုစွတ်စေပြီး ခံတွင်းနံ့ထွက်စေသည့် ပစ္စည်းများကို ကျဲသွားစေသည်။သို့သော် ကြက်သွန်ဖြူစားသည့်အခါ အနံ့ထွက်စေသည့် ပစ္စည်းများသွေးထဲဝင်ရောက်ပြီး ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် အသွင်ပြောင်းကာ ခံတွင်းနံ့ဆိုးစေသည်။
လက်ဖက်စိမ်းရည် (green tea) တွင် ပါဝင်သည့် polypheno ဓာတ်များသည် သွားအခေါင်းပေါက် ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကို ကာဆီးပေးသည်။
အသားများများစားလျှင် ခံတွင်း နံ့ဆိုးသည်။ အသားနှင့် ဒိန်ခဲများမှ ပရိုတင်းအကြွင်းအကျန်များသည် ခံတွင်းနံ့ဆိုးစေသည်။
တံတွေးရည်သည် ခံတွင်းထဲရှိ အစားအစာများကို ဆေးကြောပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ရေသောက်နည်းပြီး အာခြောက်လေ့ရှိသူများသည် ခံတွင်းနံ့ ပိုဆိုးတတ်သည်။ ဈေးကွက် အတွင်းရရှိနိုင်သည့် ဆေးအမျိုးပေါင်း (၄၀၀)ခန့်သည် အာခြောက်စေသည်။ အာခြောက်သောကြောင့် ဘက်တီးရီးယားပွားများပြီး ခံတွင်းနံ့ဆိုးစေသည်။
အာသီးရောင်သည့်အခါ အာသီးတွင် လာကပ်သည့် အနည်များသည် ခံတွင်းနံ့ဆိုးစေသည်။
သွားအတုတပ်သည့်အခါ သေသေချာချာ မသန့်စင်ထားလျှင် အနံ့ ထွက်စေသည်။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့် အံကပ်များကို တိုက်ချွတ်၍ ပိုးသတ်ဆေးရည်ထဲစိမ်ထားသင့်သည်။
သွားဖုံးရောင်သည့်အခါတွင်လည်း ခံတွင်းနံ့ဆိုးသည်။ နာတာ ရှည်သွားဖုံးရောင်နေလျှင် သွားဆရာဝန်နှင့်ပြသင့်သည်။
ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့။ပစ္စည်းတစ်ခုခု ဘယ်လောက်ပဲပျက်ပျက် တခဏတာပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် အကောင်းအတိုင်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ လူလောကမှာ လမ်းမှားရောက်ပြီး
အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့လုံးပန်းပြီး ပျက်စီးနေသူများလည်း ထိုပျက်စီးမှုအပေါ်သံဝေဂ ယူကာ ကောင်းမှုကုသိုလ်များနှင့် အစားထိုးကုစားလိုက်မယ်ဆိုရင် တန်ဘိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဝတ္ထုကြောင်းတစ်ခုကိုအစားထိုးပြောပြချင်ပါတယ်။
မိသားစုဟာ မြတ်စွာဘုရားအပါဝင် ရတနာသုံးပါးကို အသက်နဲ့လဲပြီးကြည်ညိုတဲ့ အရိယာမိသားစုပေါ့။
မအောင်မြင်တဲ့ပဲကို စုန်းပြူးလို့ခေါ်သလို ထိုမိသားစုတွေထဲမှာ မောင်ကာဠဆိုတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး ခပ်ပေပေသားတစ်ယောက်ကတော့ အရိယာမဖြစ်သေးပါဘူး။
မိဘရဲ့ဆိုဆုံးမမှုကို လုံးဝနာခံခြင်းမရှိဘဲ အပေါင်းအသင်းများနဲ့
သားဖြစ်သူကို မိမိကဲ့သို့ ရတနာသုံးပါးကို အလွန်ကြည်ညိုတဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဖခင်အနာထပိဏ်သူဌေးကြီးက တစ်နေ့မှာသားဖြစ်သူ မောင်ကာဠကို ဥပုသ်စောင့်ရင် ငွေတစ်ရာပေးမည်ဆိုကာ ကာဠကို မြတ်စွာဘုရားကျောင်းကို
သွားပြီး ဥပုသ်စောင့်စေပါတယ်။ဖြုန်းဖို့ သုံးဖို့ သောက်စားပျော်ပါးဖို့ငွေလိုနေတဲ့ မောင်ကာဠကလည်း ငွေတစ်ရာရမည်ဖြစ်တာနဲ့ ဥပုသ်စောင့်သွားပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ကျတော့ မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူသည့်
ငွေဖြစ်တာကြောင့် ငွေကိုမက်မောပြီး ကျောင်းကိုသွားပြီး
ဥပုသ်စောင့်ပါတယ်။ညချမ်းအချိန်မြတ်စွာဘုရား တရားတော်ကိုတစ်လုံးလောက်မှတ်မိမှဖြစ်မှာမို့လို့ တရားကိုသေချာစွာနားထောင်ပါတယ်။
တရားနာရင်း တရားရှုမှတ်လိုက်တာ နောက်ဆုံးမှာတော့ သောတာပတ္တိဖိုလ်တည်သွားပါတယ်။နံနက်လင်းတော့ အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာ သောတာပန်တည်ထားတာကြောင့်
စကြဝတေးမင်းစည်းစိမ်ထက်ပင် သာလွန်သော (သောတာပတ္တိမဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်ကို)ရထားတာဖြစ်နေလို့ ငွေတစ်ထောင်ကိုမက်မောတော့မည်
အရင်က သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနဲ့သောက်စားပျော်ပါး ၊ ဖြုန်းတီးပစ်နေတဲ့မောင်ကာဠ၊မိဘစကားကိုနားမထောင်ပဲ မိုက်နေတဲ့မောင်ကာဠ၊ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုလုပ်ရကောင်းမှန်းမသိ အကုသိုလ်များကိုမရှက်မကြောက်ပြုလုပ်နေတဲ့မောင်ကာဠ၊အလှူပြုလုပ်ရမှန်း၊ဥပုသ်စောင့်ရမှန်း၊ တရားနာရမှန်း၊တရားစာတွေဖတ်ရကောင်းမှန်းမသိဘဲ မျက်ကွယ်ပြု လျစ်လျှူရှုနေတဲ့မောင်ကာဠ၊အပေါင်းသင်းများနှင့်ပျက်စီးနေတဲ့မောင်ကာဠဟာ
အခုတော့ တရားတွေလို့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီး၊
ဘယ်လောက်ပင်ပျက်စီးစီး တစ်ခဏတာပြင်လိုက်လို့ လူကောင်းလူမွန်တစ်ဦးဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒီဝတ္ထုလေးကို ဖတ်ရှုပြီး တရားကျောခိုင်းနေသူ၊ကုသိုလ်တရားတွေကိုမေ့လျော့နေသူများ အချိန်မှီ ကုသိုလ်တရားများနှင့်အစားထိုးသင့်ကြောင်း၊အပေါင်းအသင်းများနှင့်အချိန်ပြည့် သုံးဖြုန်းပျက်စီးနေသူများ လမ်းမှားကိုရောက်ပြီး ပျက်စီးချင်တိုင်းပျက်စီးနေသူများ
အသိတရားရကာ ချက်ချင်း အချိန်မှီပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်
- [အရှင်ဝိမလဝံသ(နာလန္ဒာ တက္ကသိုလ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ)]
လွိုင်ကော်မြို့အဝင် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ကယားပြည်နယ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်မည့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်ရန် အထင်ကရ နေရာတခုဖြစ်သော ဒွေးမယ်နော် ညီအစ်မ ခုနစ်ဖော်ရေချိုးကန် (ခေါ်) ကန် ၇ ဆင့်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်နေကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း – မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ကြိုးစားနေပြီဖြစ်ရာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ ပိုမိုဝင်ရောက် လာနိုင်ခြင်းကြောင့် ဒေသန္တရ ဧည့်လမ်းညွှန်များကို သင်တန်းပေးခြင်း၊ လူသိ နည်းသေးသည့် သမိုင်းဝင် နေရာများကို ပြုပြင်ခြင်းများ စတင်ဆောင်ရွက် နေပြီဖြစ်ကြောင်း ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ပြောသည်။
ယခင်က ကယားပြည်နယ်တွင် တောင်ကွဲစေတီ၊ ငွေတောင်ဆည်၊ ကြေးကွင်းပတ် ကယန်းအမျိုးသမီးများ၏ လူနေမှု ဘ၀များကိုသာ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ သမိုင်းဝင် အထင်ကရ လိုဏ်ဂူဖြစ်သည့် ကြပ်ဂူနှင့် ဒွေးမယ်နော် ညီအစ်မ ခုနစ်ဖော် ရေချိုးသည့် ရေကန် (ခေါ်) ကန် ၇ ဆင့်ကိုလည်း ပြုပြင်နေသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ သမိုင်းဝင် အထင်ကရ နေရာများနှင့် လူသိများ ထင်ရှားသည့် နေရာများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ကာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား ဧည့်သည်များအား ဆွဲဆောင်သွားမည်ဟု ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ပြောသည်။
“ခရီးသွားတွေအတွက် သမိုင်းဝင် နေရာတွေကို ကျနော်တို့ ပြန်ပြုပြင် နေပါတယ်။ လမ်းတွေ ကိုလည်း ပြင်ပေးနေပါတယ်။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေကို ဒွေးမယ်နော်ညီအစ်မ ခုနစ်ဖော်ရေးချိုးတဲ့ကန်နဲ့ ကြပ်ဂူနဲ့ အဓိက ဆွဲဆောင်မယ်” ဟု ကယားပြည်နယ်ရှိ ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးစိန်ဦးက ပြောသည်။
ဒွေးမယ်နော် ညီအစ်မ ခုနစ်ဖော် ရေချိုးသည့်ကန်ဟု လူသိများသည့် ကန် ၇ ဆင့်သည် ဒီမော့ဆို မြို့နယ် အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ကြပ်ဂူသည် လွိုင်ကော်မြို့တွင် တည်ရှိသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုင်းကျော်အုန်းက “အခု ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိလာပြီ ဆိုတော့ ပြည်နယ်တွေအားလုံး ခရီးသွာ ဧည့်သည်တွေအတွက် ပြန်ဖွင့်သွားမှာပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေက တိုင်းရင်းသားတွေ နေရာကို ပိုသွားချင်ကြတယ်။ အခု ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ကလွဲပြီး ကျန်တာသွားလုိ့ရပါပြီ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကယားပြည်နယ်သည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာရေးအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည့် နေရာဖြစ်ကြောင်း ဦးစိုင်းကျော်အုန်းက ဆိုသည်။
နယ်မြေအေးချမ်းမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်လျှင် ခရီးသွား ပိုလာမည် ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံခြားသား အများစုသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ နေထိုင်သည့် ဒေသများသို့ ပိုမိုသွားရောက် လေ့လာလိုကြကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ ခရီးသွား ဧည့်လမ်းညွှန် တဦးဖြစ်သူ ဒေါ်တင်နွယ်အေးက ပြောသည်။
သူက “နိုင်ငံခြားသားတွေက အသစ်အဆန်းဖြစ်တဲ့နေရာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာနိုင်တဲ့နေရာ၊ လူနေမှုစရိုက် လေ့လာလို့ ရတဲ့နေရာကို သဘောကျတယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းရင်တော့ သွားလည်မယ့်သူ များမှာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အတွင်းရေးမှူး ၁ ဦးတင်ထွန်းအောင်ကလည်း ပြည်နယ်များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန် အဓိကလိုအပ်ကြောင်း၊ ဟိုတယ်များ လုံလောက်စွာ ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်း အလွန်အရေးကြီးကြောင်း၊ ယခု နောက်ပိုင်း ပြည်နယ် ဒေသများသို့ နိုင်ငံခြားသားများ သွားရောက် လည်ပတ်ခွင့် ပြုလိုက်သဖြင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ ပိုဝင်ရောက် လာမည်ဟု ယူဆ ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အဓိကကတော့ ကယန်းလူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ နေရာကို ပိုသွားကြတယ်။ ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေက ပြည်နယ်တွေကို ပိုသွားချင်ကြတယ်” ဟု ဦးတင်ထွန်းအောင်က ဆိုသည်။
ကယားပြည်နယ်သို့ ၁၉၉၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ၂ နှစ်ခန့်အထိ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ သွားရောက်လည်ပတ်မှု များခဲ့ သော်လည်း၊ ၁၉၉၈ ၀န်းကျင်တွင် နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ခဲ့ကြောင်း သူက ဆက်လက် ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမှာ ၂၀၁၁ ခုနစ်တွင် ၄၁၀၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခု နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ၆၀၀၀၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။
၂၀၁၃ ခုနစ်အတွက် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားဧည့်သည် ဝင်ရောက်မှု ၂ သန်းရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားရာ၊ ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာအထိ ၁.၇၅ သန်းခန့် ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုင်းကျော်အုန်းက ပြောသည်။
ထိုင်းမှ ကန့်ကွက်သူများက ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးကို လျှပ်စစ်မီးဖြတ်၊ ရေဖြတ်ကာ ၀န်းရံပိတ်ဆို့
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် အစိုးရဆန့်ကျင့်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွင် ကန့်ကွက်သူများက ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး အဆောက်အဦကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ရေထောက်ပံ့မှုများ ဖြတ်တောက်လိုက်ကြသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၂၇က်က ကန့်ကွက် သူများသည် အဆောက်အဦကို ၀န်းရံကာဆီးထားသော သံဆူးကြိုးများကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပြီး ၀န်းရံပိတ်ဆို့မှုကို တစ်ဆင့်တိုး ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကန့်ကွက်သူများက အတာအဆီးများ ပြုလုပ်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဖယ်ရှားပေးရန်နှင့် စစ်တပ်မှာ အာဏာ သိမ်းပေးရန်လည်း တောင်းဆိုနေကြသည်။ သူတို့က ၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလက်ရှင်နာဝတ်တရာကို နှုတ်ထွက်ပေးရန်နှင့် ကြားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုထားကြသည်။
ကန့်ကွက်သူများက ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး ခြံဝန်းကို ကာရံစောင့်ကြပ်နေသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖယ်ရှားမပေးလျှင် ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့် အဆောက်အဦဝန်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကြမည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဆန္ဒပြသူများက လျှပ်စစ်မီးနှင့် ရေလွှတ်သည့် နေရာများကို ဖြတ်တောက်လိုက်ကြောင်း ဘန်ကောက်မြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိတစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလက်သည် ရုံးအတွင်း ရှိ၊ မရှိကိုမူ တရားဝင်ပြောကြားခြင်း မရှိခဲပေ။
လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ကမူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ကန့်ကွက်သူများ ၀င်ရောက်လိုသည့် အစုိးရအဆောက်အဦ ၀န်းခြံများအတွင်း လျောလျောရှူရျူ ၀င်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ လိုက်လျောခွင့်မပြုမီ နှစ်ရက်ကမူ အကြမ်းနည်းဖြင့် နှိမ်နှင်းခဲ့ဖူးသည်။
ပြေးခုန်ပစ် ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်ဟောင်း ဒေါ်ကော့ဂျာ (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
အိုလံပစ် တံဆိပ်ပါတဲ့ အားကစားတီရှပ် အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီရှည်ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး သနပ်ခါး ဖွေးဖွေး လိမ်းခြယ်ထားတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အပြင်အဆင်နဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတဦးကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ မနီးမဝေး ကွင်းပြင်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
ဆီးဂိမ်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက် လက်မှတ် ရောင်းချနေတဲ့နေရာ အနီးအနားမှာ သူရှိနေပြီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို လာကြမယ့် နိုင်ငံတကာက ဒိုင်လူကြီးတွေကိစ္စနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပုံ ပေါ်ပါတယ်။
အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သူ့နာမည်ကိုတော့ ဒေါ်ကော့ဂျာ လို့ခေါ်ပြီး ကချင်တိုင်းရင်းသား တဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၁ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့ မီတာ ၃၀၀၀ အမျိုးသမီး ပြေးခုန်ပစ် ပြိုင်ပွဲမှာ အာရှစံချိန်ချိုးပြီး ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ပြေးခုန်ပစ် လက်ရွေးစင်ဟောင်း တဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် တုန်းကလည်း အာရှအကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဘောလုံးဒိုင်လူကြီးဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှာ အမျိုးသမီး ဘောလုံးဒိုင်လူကြီး ကြီးကြပ်သူအဖြစ် တာဝန် ယူထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်ကော့ဂျာက ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ကစပြီး ကျင်းပတဲ့ ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် အိုလံပစ် မီးရှူးတိုင်ကို သယ်ဆောင်ရတဲ့ သူတွေ အထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ကြမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရွှေတံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ရွေးစင် အားကစားသမား ဟောင်းကြီးတွေချည်းပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အရင်ခေတ်တုန်းက ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ၇၂ ဦးက အိုလံပစ်မီးရှုးတိုင် သယ်ကြတယ်၊ ကျမလည်း ရွှေတံဆိပ်ဆု ရခဲ့တဲ့ လက်ရွေးစင်ဟောင်း ဖြစ်တာကြောင့် မီးရှုးတိုင်ကိုင်ခွင့်ရတာပါ” လို့ ဒေါ်ကော့ဂျာက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီး ဘောလုံးပွဲ ဒိုင်လူကြီး ကြီးကြပ်သူအဖြစ်လည်း တာဝန်ယူထားတဲ့ ဒေါ်ကော့ဂျာဟာ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့
ဘောလုံး ဒိုင်လူကြီးလုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားကြပေမယ့် ဘာသာစကားပိုင်းနဲ့ တခြား အရည်အချင်းတွေမှာ အားနည်းချက်၊လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတာတွေကြောင့် အမျိုးသမီး ဒိုင်လူကြီး နည်းနေသေးတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။
“သင်တန်းနည်းပြ ဆရာတချို့ကတော့ ဘာသာစကားအတွက် ကလေးတွေကို Yes နဲ့ No သိရင်ရပြီလို့ ပြောကြတယ်။ ဒါကို ကျမ လက်မခံဘူး။ ဘာသာစကားနဲ့ တချို့ အရည်အချင်းတွေက အရမ်းလိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သင်တန်းသားတွေ ထဲက
တချို့ကလည်း ကျမပြောတာတွေ ဆိုရင် လက်မခံချင်ကြဘူး” လို့ ဒေါ်ကော့ဂျာက အမျိုးသမီး ဘောလုံးဒိုင်လူကြီး သင်တန်းသားတွေကို သင်တန်းပေးနေရတဲ့ အခြေအနေ တချို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
သူ့ အနေနဲ့ အားကစားသမား တဦးအဖြစ် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း ဆင်းရဲတဲ့ဘဝ အခြေအနေက လာခဲ့တဲ့ သူဖြစ်တာတကြောင်း၊ ပညာအရည်အချင်း ပိုင်းမှာလည်း အားနည်းခဲ့တာ တကြောင်းကြောင့် သူဟာ အမျိုးသမီး
ဒိုင်ကြီးကြပ် တယောက် ဖြစ်နေပေမယ့် တချို့ သင်တန်းသားတွေက သူ့အပေါ် အထင်မကြီးသလို၊ လက်မခံချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးကို တွေ့နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်ကော့ဂျာဟာ ၁၁ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့ ပြေးခုန်ပစ် အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ အာရှစံချိန် ချိုးပြီး ရွှေတံဆိပ်ဆုရ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ပြေးခုန်ပစ် အားကစားပိုင်းမှာ ဘာကြောင့် တာဝန်မယူ ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာကလည်း မေးခွန်း ထုတ်စရာတခုပါ။
“အရင်တုန်းက အားကစားကွင်းက အောင်ဆန်းကွင်း တကွင်းပဲရှိတယ်၊ အဲဒီကွင်းကလည်း မကောင်းဘူး၊ အင်တိုက်အားတိုက် ပြေးပြီး ကွင်းမညီညာ မှုနဲ့ သွားတွေ့တော့ ခြေထောက် အရိုးအက်သွားတယ်။ အချိန်အတော်ကြာကြာ နားလိုက်ရတယ်” လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်အောက် သက်ကြီး ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရွှေတံဆိပ် ၄ ခုနဲ့ ငွေတံဆိပ် ၁ ခု ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲက ဒေါ်ကော့ဂျာအတွက် ပြေးခုန်ပစ် အားကစား အနေနဲ့ ပြိုင်ခဲ့တာ နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲတပွဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
“နောက်ပိုင်းမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြိုင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဘောလုံး ဒိုင်လူကြီး သင်တန်းတက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ဘောလုံးဒိုင်လူကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်” လို့ ဒေါ်ကော့ဂျာက ရှင်းပြပါတယ်။
ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် လက်ရွေးစင် အားကစားသမားဟောင်း တဦးဖြစ်တဲ့ သူက လက်ရှိ ကစားနေကြတဲ့ မြန်မာ အားကစား သမားတွေ အပေါ် အားမရဘူးလို့ ဆိုလာပါတယ်။
“ခံယူချက်နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အရမ်းကွာသွားတယ်။ အခု ကစားသမားတွေက သူတို့ကို ခေါ်မယ်ဆိုရင် လစာ ဘယ်လောက် ရမလဲ အရင်မေးကြတယ်၊ ကျမတို့တုန်းက ပိုက်ဆံ၊ လစာဆိုတာ မသိဘူး။ နင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆရာတွေက ပြောလို့ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားရမယ် ဆိုတာပဲ သိခဲ့ကြတာ” လို့ ဒေါ်ကော့ဂျာက ပြောပြပါတယ်။
လက်ရှိ အားကစားသမားတွေ အနေနဲ့ အဘက်ဘက်က ထောက်ပံ့မှုတွေ အများအပြား ရရှိနေသလို၊ အခွင့်အလမ်း တွေလည်း ရှိနေပေမယ့် နိုင်ငံအတွက်၊ မိမိကိုယ်တိုင် အတွက် ဘယ်လိုမျိုး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး နည်းလာတဲ့အကြောင်း၊ တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ကြတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒါကြောင့် အားကစားလောကမှာ ကြာရှည် မရပ်တည်နိုင်ကြတော့တဲ့ အကြောင်းတွေလည်း သူက သုံးသပ်ပါတယ်။
“ထရိန်နင် လုပ်ကြပါဆိုလည်း မလုပ်ချင်ကြဘူး။ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ စွမ်းရည် စစ်ဆေးမှုကျတယ်၊ ကျမထက် သာတဲ့သူ ဖြစ်အောင်၊ ကျမတို့ ခေတ်တုန်းက မရခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရအောင် ကစားသမားတွေကို ဖြစ်စေချင်တာ” လို့ ဒေါ်ကော့ဂျာက ဆိုပါတယ်။
ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးရှိနေတဲ့ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း၊ အမျိုးသမီး ဘောလုံး အသင်းတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းလာပြီး မြန်မာ့ ဘောလုံးလောက အခြေအနေက တိုးတက်မှု မရှိတော့တဲ့ပုံစံ တွေ့နေရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အားကစား ပြိုင်ပွဲ အများစုဟာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းနေတာ တွေ့ရ တာကြောင့် ပရိသတ်ရဲ့ အာရုံကို အကောင်းဆုံး ဆွဲဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့တော့ လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ သူက အကြံပြုပါတယ်။
“ပရိသတ်တွေ ဆိုတာက “ဟာ” ကနဲ “ဟင်” ကနဲ ဖြစ်အောင် ကစားနိုင်ကြတဲ့ ကစားသမားတွေကို ကြည့်ချင်ကြတာ၊ ဒါပေမယ့် အခု အားကစား သမားတွေက အဲဒီလိုဖြစ်အောင် မကစားနိုင်ကြတော့ဘူး။ ကြံ့ခိုင်မှု မရှိကြဘူးလေ၊ စိတ်ဓာတ် တွေလည်း လိုသေးတယ်။ အဲဒီလို ဆိုမှတော့ မြန်မာ့ ဘောလုံးလောက အခြေအနေက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကောင်းလာတော့ မှာလဲ” လို့ ဒေါ်ကော့ဂျာက သုံးသပ်ပါတယ်။
တချို့ အားကစားသမားတွေဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် မလုပ်ကြတော့ဘဲ တားမြစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဒေါ်ကော့ဂျာဆီက သိရပါတယ်။
တားမြစ်ဆေး သုံးစွဲပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်တက်အောင် ဆောင်ရွက်ချင်ကြတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေကို တွေ့နေရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သူတို့ခေတ်တုန်းက အားကစားသမား တဦးရဲ့ ဘဝဆိုတာ ငွေကြေးနဲ့ တခြား ထောက်ပံ့မှုတွေ နည်းပေမယ့်လည်း အင်တိုက် အားတိုက် ကြိုးစားခဲ့ကြလို့ ဆုတွေ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရခဲ့ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း အားကစား သမားတွေမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆု တဆုရရင် သိန်း ၁၀၀ ရမယ်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်သွားတယ်လို့ ဒေါ်ကော့ဂျာက ပြောပြပါတယ်။
“ကျမတို့ မကစားနိုင်ရင် ဘယ်သူမှ လှည့်မကြည့်ကြဘူး။ အခု ကစားသမားတွေဆိုရင် ဘယ်ဌာနက ခေါ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေရတာ။ ကျမ အခုချိန်အထိ နိုင်ငံတော်က ပေးတဲ့ အိမ်တလုံးမပြောနဲ့ ဖုန်းတောင် မရဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမ တာဝန်ယူထား တာကြောင့် အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်တယ်။ တနင်္ဂနွေတရက်ကိုတော့ ဘုရားအတွက် အချိန်ပေးတယ်၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း သွားတယ်” လို့ ဒေါ်ကော့ဂျာက ဆိုပါတယ်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားထုကို စီးပွားဖြစ် လုပ်ကိုင်လာသည့် နေ့ပါတီပွဲများ
ရန်ကုန်မြို့တွင် နေ့ကလပ်များ ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် တက္ကသိုလ်ေ ကျာင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ပစ်မှတ်ထား ကာ နေ့ပါတီပွဲများ အား စီးပွားရေးအသွင် ဖန်တီးထားခြင်းသည် လူငယ်များ၏ လွတ်လပ်မှု စိတ်အခြေခံကို အစွန်းရောက်နိုင်သည်ဟု လူမှုနယ် ပယ် အဖွဲ့အစည်းမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် တချို့က ဝေဖန်လျက် ရှိသည်။
ဖွင့်ထားသည့် တစ်ချပ်တည်းသော တံခါးဝင်ပေါက်ဝတွင် လုံခြုံရေးနှစ်ယောက်ရှိသည်။ လက်မှတ် ၀ယ်သူများနှင့် အရက်ပုလင်း ဖောက်သူများကို အလှည့်ကျ လက်တစ်ဖက်စီတွင် သင်္ကေတ တံဆိပ်တုံး ရိုက်ပေးပြီး လက်နက်ပစ္စည်းပါ မပါ စစ်ဆေးလျက် ရှိသည်။ စစ်ဆေးမှုကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အလင်းရောင်မှ ညအမှောင်နီးပါး ဆလိုက် မီးရောင်စုံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ …
လက်မှတ် အရောင်းကောင်တာနှင့် တစ်ဆက်တည်း အရက်ပုလင်းမျိုးစုံ၊ ဘီယာမျိုးစုံခင်း ကျင်းပြသထားသည့် အရက်အရောင်းဆိုင် ကောင်တာကို မြင်တွေ့ရသည်။ ကောင်တာနှင့် ကပ်လျက်တွင် DJ ထားရှိပြီး အဆိုပါ အရက်ကောင်တာနှင့် DJ ကောင်တာတို့၏ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခန်းမကျယ်ကြီးတွင် မှေးမှိန်လှသည့် မီးရောင်စုံ များကြား အရောင်အသွေးစုံ လူငယ်များက ခုန်နေကြသည်။
ခန်းမ၏ ဘေးနှစ်ဖက် နံရံများတွင် ခင်းကျင်းထားသည့် VIP စားပွဲဝိုင်းများတွင်လည်း လူအပြည့် ဖြစ်နေသည်မှာ ပေ ၄၀ x ပေ ၆၀ ရှိ ခန်းမတွင် လူဦးရေ ၇၀ ထက်မနည်း ရှိနေသည့်အတွက် အံ့သြစရာ မကောင်းလှပေ။
လူငယ်များကို ကြည့်ရသည်မှာ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်ပါးလျက်ရှိသည်။ တချို့က ခန်းမလယ်တွင် လူပေါင်းစုံစု၍ ကခုန်ကြသည်။ တချို့က ကိုယ့်အုပ်စု၊ ကိုယ့်အဖွဲ့ဖြင့်သာ ၀ိုင်းဖွဲ့ကကြသည်။ ယောက်ျားလေး အများစုသည် အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၃ ကြား လူငယ်များဖြစ်ပြီး ခေတ်ပေါ် အ၀တ်အစား ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကို ၀တ်ဆင် ထားကြသည်။ ဂိတ်ဝတွင် မှတ်ပုံတင် စစ်ဆေးခြင်း မရှိသည့်အတွက် အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သူများကိုလည်း တွေ့ရသည်။
မိန်းကလေး အများစုသည် အသက် ၂၂ အောက် လူငယ်များဖြစ်ပြီး အပေါ်မလုံ၊ အောက်မလုံ ခေတ်ပေါ် အ၀တ်အစားများ၊ ၀တ်ဆင်၍ ယောက်ျားလေးများနှင့် ရင်ပေါင်တန်းကာ အရက်ဘီယာများကို မှာယူ သောက်စားလျက် ရှိသည်။ တချို့မြင်ကွင်းများသည် လူငယ်များနှင့် မလိုက်ဖက်အောင်ပင် တွဲ၍မြင်နေရသည်။
ခေတ်မီလွန်းသည့် လူငယ်များကို အပြစ်တင်ရမလား။ တိုးတက်လွန်းသည့် ခေတ်စနစ်များ ပြောင်းလဲပုံကို အပြစ်တင်ရမလား၊ အနောက်ယဉ်ကျေးမှု ထိုးဖောက်လာသည်ကို အသိအမှတ်ပြုရမလား ဝေခွဲမရတော့ပေ။
တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံမှ လာရောက်ကြသည့် လူငယ်များသည် အ၀တ်အစားများ လဲလှယ်ဝတ်ဆင် ထားဟန် တူသည်။ တချို့ အချိန်လွန်နေ၍လား မသိပေ။ နေ့ကလပ်တွင်းရှိ အိမ်သာ၌ပင် ကျောင်းဝတ်စုံများ ပြန်လည် ၀တ်ဆင်၍ ထွက်ခွာသွားကြသည်။ ထူးခြားသည်မှာ လာရောက်သည့် လူငယ်အများစုသည် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များမှပင် ဖြစ်သည်။
အစိုးရ၏ စီမံချက်ဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း နေ့ကလပ်များ ပိတ်သိမ်းခဲ့ရာ Sky way, Generation X, ဆန်ဖရန်စစ်စကို၊ ပုလဲကွန်ဒိုမှ ယူကလစ်ဘား၊ ရွှေတောင်ကြားမှ BMW, ရန်ကုန်အင်တာနေရှင်နယ်မှ ဖလန်မင်ဂိုးဘား အစရှိသည့် နေ့ကလပ်များ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး တချို့ နေ့ကလပ်များမှ ညကလပ်အဖြစ် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိသည်။
တချို့နေ့ကလပ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် နေရာများနှင့် ဟိုတယ် အခန်းတချို့တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုကဲ့သို့ နေ့ပါတီများကို ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ပွဲစီစဉ်သူများသည် အသက် ၂၃ နှစ်အောက် ကျောင်းသားများသာ ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများမှတစ်ဆင့် လက်မှတ်ရောင်းချမှု ပြုလုပ်၍ နေ့ပါတီများကို စီးပွားရေးအဖြစ် လုပ်ကိုင်လာကြသည်။ နေ့ကလပ်နှင့် နေ့ပါတီ၏ ကွာခြားချက်သည် နေ့ပါတီသည် လက်မှတ်ကြိုတင် ရောင်းစနစ်ဖြစ်ပြီး ကောင်တာ၌လည်း ကျန်ရှိပါက ထပ်မံ ၀ယ်ယူနိုင်သည်။ ကျောင်းသားများသည် ကိုယ်စား ရောင်းချနိုင်ပြီး လက်မှတ် အရေအတွက်အလိုက် ကော်မရှင်ခရသည်။
နေ့ပါတီ စီစဉ်သူများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီကြသဖြင့် တချို့ ပွဲစီစဉ်သူများသည် ပါတီတွင်း Sexy Dance ပြိုင်ပွဲများကို ဆုပေးစနစ်များဖြင့် ထည့်သွင်းလေ့ ရှိသည်။
အဆိုပါ Sexy Dance ပြိုင်ပွဲတွင် တက်ရောက်လာသည့် မည်သည့် မိန်းကလေးမဆို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး မိန်းမလျာများပင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ဆုကြေးအဖြစ် တစ်သိန်း သတ်မှတ်ထားပြီး တချို့ မိန်းကလေး များသည် sexy ပိုကျစေရန် ရည်ရွယ်၍လား မသိပေ။ အင်္ကျီများပင် ချွတ်၍ ကကြသည်။
နေရာ အနေအထားအလိုက် အခန်းတွင်း ပြင်ဆင်မှုမှလွဲ၍ ကျန်အချက်များ အားလုံးသည် နေ့ကလပ် နည်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။ နေ့ပါတီသည် အချိန်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့်သာ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခု ၂၀၁၃ခုနှစ် အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလ အတွင်းမှစ၍ နေ့ပါတီ ပြုလုပ်မှုများကို ဟိုတယ်များက ငှားရမ်းမှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး နေ့ပါတီပွဲများ ကျင်းပမှု မရှိသလောက် ရှားသွားသည်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ပစ်မှတ်ထား ပြုလုပ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတော် အစိုးရက လိုက်လံဖမ်းဆီးလျက် ရှိသော်လည်း နားလည်မှုဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသူများ ရှိနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုကို ပုံဖော်ထားသည့် ညကလပ်များသည် ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှ စတင်ကာ ပိုမို အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု၊ လူသတ်မှုများ၊ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ၎င်းညကလပ်များမှ အချို့ကို ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။
ယခင် ညကလပ်များ ၁၀ ခု အရေအတွက်အောက်မှ ယခုလက်ချိုး မရနိုင်အောင် မြို့နယ်အလိုက်နီးပါး ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိသည်။ ထိုမှ ညဘက် မသွားနိုင်သူ လူငယ်တချို့က နေ့ပါတီအဖြစ် ဖန်တီးကာ ခန်းမ ငှားရမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်မှစ၍ နေ့ကလပ်များ ပေါ်တင်စွာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။ Sky way, Generation X, ဆန်ဖရန်စစ်စကို စသည့်နေ့က လပ်များသည် ထင်ရှားသည့် နေ့ကလပ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းနေ့ကလပ်များကို ပိတ်သိမ်းပြီး နောက်နေ့ပါတီပွဲများကို ဟိုတယ်ခန်းများ ငှား၍ ပြုလုပ်သည့်အပြင် နားလည်မှုဖြင့် အိမ်ခန်းငှား၍ ပြုလုပ်ခြင်းများလည်း ရှိသည်။။
ထိုကဲ့သို့ နေ့ပါတီ အသွင်ပြောင်းကာ ဆက်လက် ပြုလုပ်နေခြင်းသည် ကျောင်းနေအရွယ် လူငယ်များ၏ အနာဂတ်ကို မှေးမှိန်လာနိုင်သည်။ လူငယ်အများစုသည် ပျော်ချင်ပါးချင်သည့် စိတ်အခြေခံဖြင့် လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးကြသည်။ လွတ်လပ်မှု အစွန်းမရောက်စေရန် မိဘဆရာများက ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ကြသော်လည်း ကျောင်းဖွင့်ချိန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို ပစ်မှတ်ထား ဖွင့်လှစ်ခြင်းသည် နောက်ကွယ်မှ မိသားစုများ၏ ဘ၀ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရပေမည်။
လူငယ်များသည် လွတ်လပ်မှုကို အစွမ်းကုန် လိုချင်မှုရှိသော်လည်း ထိန်းချုပ်တတ်ရန် ပဲ့ကိုင်ရမည်။ ထိုသို့ပဲ့ကိုင်မှု မရှိသူများကို နေ့ပါတီပွဲများက စွဲမက်စရာတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် ပတ်ဝန်းကျင်က တွန်းပို့ တတ်သည်။ ပါတီပွဲ၏ နောက်ကွယ် ပွဲတက်သူ လူငယ်များ၏ ကျောင်းမုန့်ဖိုးများ၊ မုန့်ဖိုးပေးသူမိဘများ၊ အုပ်ထိန်းသူများ၊ လူငယ်များ၏ စူးစမ်း လိုစိတ်များသည် ပွဲစီစဉ်သူ စီးပွားရေးသမားများ၏ အကျိုးအတွက်သာ အသုံးပြုရပေလိမ့်မည်။ မည်သူမျှ အကျိုးမရှိသည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း လူငယ်များ၏ စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခု ဖြစ်နေခြင်းသည် အနာဂတ်အတွက် ရင်လေးစရာပင် ဖြစ်နေသည်။
အဆိုပါ နေ့ကလပ်များသည် ညကလပ် မသွားနိုင်သည့် ကျောင်းသား လူငယ်ထုကို ရည်ရွယ်ကာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သဖြင့် အစိုးရမှ စီမံချက်ချကာ ဖမ်းဆီးပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ပုလဲကွန်ဒိုရှိ ဖွင့်လှစ်ထားသော နေ့ကလပ်များ ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ နာမည်ကြီး Sky Way နှင့် နေ့ကလပ်သုံးခု ပိတ်သိမ်းခဲ့ရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးမှုကြောင့် တာမွေပလာဇာ အောက်ထပ်ရှိ ဆန်ဖရန်စစ်စကို နေ့ကလပ်ကို ပိတ်ကာ ညကလပ်အဖြစ် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ယင်းကလပ်သည် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာပိုင် အဆောက်အအုံ ခန်းမတွင် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
နေ့ကလပ်များ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးရှိ နေ့ကလပ်များ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး အလွှာပေါင်းစုံ၊ အရွယ်ပေါင်းစုံ၊ ပျော်ပါးသည့် ညကလပ်များတွင်ပါ ကျောင်းနေအရွယ် လူငယ်များ နည်းပါးသွားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ကျောင်းသား လူငယ်များ၏ ပျော်ပါးချင်စိတ်ကို အသုံးချကာ နေ့ပါတီများအသွင် ဖန်တီး၍ ပွဲစီစဉ်သူများက လက်မှတ်များဖြင့် နီးစပ်ရာလူမှ အဆင့်ဆင့် ရောင်းချကာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နေ့ပါတီ ပွဲများသည် ကျောင်းသားများသာ ဦးဆောင်၍ စီစဉ်ကြပြီး ကျောင်းသားများနှင့် နီးစပ်ရာလူငယ်များသာ တက်ရောက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
နေ့ပါတီ ပြုလုပ်မှုများသည် ယခင်က သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အလိုက် ခွင့်ပြုမိန့် ရယူပြီးမှသာလျှင် ပြုလုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုမွေးနေ့ ပါတီစသည်ဖြင့် အမည်ခံကာ ခန်းမများ ငှားရမ်း ပြုလုပ်ကြသည်။
ကျော်ထူးစံ (ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား)
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီးသွားကြတာပေါ့။ အရင်ပုလဲ ကွန်ဒိုက ယူကလစ်းဘား နေ့ကလပ်ကို သွားဖူးတယ်။ မှတ်ပုံတင် မစစ်ဘူး။ လက်နက်ပါမပါ လက်မှတ်ဝယ် မ၀ယ်စစ်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ သင်္ကေတ တံဆိပ်တုံးရိုက်တယ်။ ၀င်ကြေးက ၄၀၀၀၊ ၆၀၀၀ ပေးရတယ်။ အရက်ပုလင်းဖောက် ၀င်ရင် ၇၀၀၀၀ ကနေ ၈၀၀၀၀ ထိ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါလူ ၅ ယောက်ပဲရတယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက မတူကြဘူး။ အခု နေ့ကလပ်တွေ မရှိတော့ ခန်းမရှာပြီး ပါတီလုပ်ကြတယ်။ ပါတီလုပ်တာ များတဲ့နေရာတွေက ရန်ကုန် အင်တာနေရှင်နယ်က ဖလန်မင်းဂိုးဘား၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ဟိုတယ်ရွှေဂုံတိုင်၊ ရွှေတောင်ကြားက BMW တို့မှာ လုပ်ကြတာများတယ်။ ကျွန်တော်တို့က စိတ်အပန်းဖြေကြတာပါ။ အရမ်းစိတ်ညစ် နေတဲ့အချိန် အရမ်း စိတ်ပေါ့ပါးတယ်။ အများစုက ကကြတာပါပဲ။ အရက်ထိုင်သောက်နေတာ မရှိပါဘူး။ အခု ပါတီပွဲစီစဉ်တဲ့ သူတွေက သူတို့နီးစပ်သူက တစ်ဆင့် လက်မှတ် ရောင်းကြတာပါ။ နေ့ကလပ်လိုမျိုးတော့ မရှိတော့ပါဘူး။
Day Club တွေက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အပြတ်ငှားတာများတယ်။ နာရီနဲ့တော့ မငှားကြဘူး။ ဥပမာ ၁၂ နာရီကနေ ၆နာရီအထိ ၁၀ သိန်း ပေးရတယ်။ ခန်းမငှားခချည်းပဲ ၁၁သိန်းပေးရတယ်။ တချို့ကလပ်တွေက ဒီဂျေသမားတွေ ပါပါတယ်။ မတူဘူးပေါ့။ ဈေးနှုန်းလည်း မတူဘူး။ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တွေ၊ စတိတ်ကျောင်းသား တွေရယ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ၁၈နှစ်အောက်တွေ ၊ စတိတ် ကျောင်းသားတွေ လုံးဝပေး မ၀င်ဘူး ဆိုတာတော့ ပါတီတိုင်းမှာ လက်စွဲဆောင်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ အရင်တုန်းက ပါတီလုပ်တုန်းက ပါမစ်မလိုဘဲ နားလည်မှုနဲ့ လုပ်တာတွေရှိတယ်။ ၁၈နှစ်အောက် လာရင် လုံးဝပေးမ၀င်ဘူး။ သေသေချာချာတော့ မှတ်ပုံတင်ထုတ် ဆိုပြီး လိုက်စစ်ဆေးလို့တော့ မရဘူး။ ပုံစံက ခပ်ငယ်ငယ်ဆိုရင် ပေးမ၀င်ဘူး။ လူငယ်တွေ မသောက်မစားဘဲ holiday မှာ အပန်းဖြေသလိုမျိုး ပျော်ပျော်ပါးပါး ကဲကြတာပါ။ Day Club တွေက Night Club တွေနဲ့ မတူဘူး။ လူငယ်တွေ လာတာများတယ်။ Night Club ကတော့ ကျောင်းပြီးတဲ့သူတွေ အလုပ်လုပ် နေတဲ့သူတွေ၊ အလွှာပေါင်းစုံလာတာ။ Day Club က လုံးဝသီးသန့် အရက်သမားလည်း မလာဘူး။ ဆေးသမားလည်း မလာဘူး။ အဲလိုမျိုး ကွာခြားတာပေါ့။ အကုန်လုံး ခုန်ပေါက်ကကြပြီး ပျော်ပါး ရန်ဖြစ်တာတွေ မရှိပါဘူး။
အရင်လုပ်တုန်းက ပါမစ် လျှောက်ရတယ်။ ကိုယ့်လုပ်မယ့် မြို့နယ်မှာ ပါမစ်လုပ်ရတယ်။ ဥပမာ ရန်ကင်းမှာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ရန်ကင်းမြို့နယ်ရုံးမှာ ပါမစ်ယူရတယ်။ အနည်းဆုံး ဆွဲခြင်း တစ်ခြင်းတော့ ပေးရတယ်။ အခန်းငှားခက အနည်းဆုံး ၈သိန်း၊ ၁၀သိန်း၊ ရပ်ကွက်ရုံး၊ ရဲစခန်းအဆင့်ဆင့် သွားရတယ်။ အထက်တန်း ကျောင်းသား အရွယ်မပါဘူး။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားနဲ့ တခြား လူတွေ လာတယ်။ ပန်းဖလက်ဝေတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက လက်မှတ်ရောင်းပေးတယ်။ ၁၈ နှစ်အောက် မသောက်ရဆိုရင် ၁၈ နှစ်အောက် တွေလာတယ်။ မူးတယ် သောင်းကျန်းတယ်။ လူအများနဲ့ဆိုတော့ တားလို့မရဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ Day Club တွေ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။
ကိုမိုးစက်အောင် (တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား)
Day Club တွေကို ကျွန်တော်တို့က သူငယ်ချင်းတွေကမှ ညထွက်လို့မရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတဲ့ အခါကျတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို နေ့ခင်းမှာ အကုန်လုံးစုပြီး ချိန်းပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ် သောင်းကျန်းလို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုပေါ့။ အဲလိုနေရာတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီးသွားတာ ရှိသလို တစ်ခါတလေကျရင်တော့ ကောင်မလေးရှာချင်လို့ သွားတာရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်လို့ သွားတာရှိတယ်။ အဓိကကတော့ သွားက တာပေါ့။ ကဲချင်တာပေါ့။
သူငယ်ချင်းတွေရှိလို့၊ သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်လိုတက်တာပါ။ ကောင်မလေးတွေ ရမလားဆိုပြီး တက်တာပါ။ အဓိကကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကချင်လို့ သွားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ မသောက် မစားဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ကချင်လို့တက်တာပါ။ ရန်ဖြစ်တာတော့ မရှိပါဘူး။ စိတ်မွန်းကျပ်မှုတွေ ရှိတဲ့ အခါကျတော့ လူငယ်တွေ ဆိုတော့ ဒေးကလပ် သွားပြီး ကောင်းကောင်း ကဲလိုက်တာပေါ့။